prefrontal / accumbal catecholamine စနစ်သည်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည်ကို (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်သည်
ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆု
Prefrontal / accumbal catecholamines စနစ်ကလုပ်ငန်းစဉ်များမြင့်မားတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုး salience (2012)
တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2012; 6: 31 ။ EPub 2012 ဇွန် 27 ။
Puglisi-Allegra S က, Ventura R ကို.
Psicologia Dipartimento နှင့် Centro“ Daniel Bovet”၊ “ Sapienza” Rome of Rome တက္ကသိုလ်, အီတလီ။
စိတ်ခွန်အားနိုး salience ရည်မှန်းချက်ရှာ, ယူအန္တရာယ်ပမာဏကိုနှင့်အစွန်းရောက်ဖို့ပျော့ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံစွမ်းအင်၏ခွန်အားကိုထိန်းညှိ။ မြင့်မား စိတ်ခွန်အားနိုး အတွေ့အကြုံများအလွန်အမင်းမြဲမှတ်ဉာဏ်မြှင့်တင်ရန်s ကို။ ဒီဖြစ်စဉ်, သာမန်အခြေအနေများအတွက်များ၏အလွန်အမင်းမြင့်မားနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများသပ္ပါယ်ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ခွန်အားနိုး salience maladaptive ရလဒ်များအတွက်ရရှိလာတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကျူးကျော် re-ကြုံတွေ့နိုင်အမှတ်တရများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြောယန္တရားများဖြန်ဖြေ စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မျိုးစိတ်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်သုခချမ်းသာအဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ထို့ကြောင့်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဤအာရုံကြောယန္တရားများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနိုင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု ပုံမှန်မဟုတ်သော၏ စိတ်ခွန်အားနိုး salience ကွဲပြားခြားနားသောရန် လှုံ့ဆော်မှု compulsive ရှာသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်း maladaptive မှဦးဆောင်။ ကျနော်တို့ကပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပူဇျောပါပွီ prefrontal cortical norepinephrine (NE) ဂီယာများအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည် စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု အလွန်အမင်းအဓိကရန် လှုံ့ဆော်မှုယင်းနျူကလိယ accumbens (NAc) တွင် dopamine (DA) ၏မော်ဂျူ, ရှိသမျှလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာကတဆင့်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကြောင်းပြသကြ prefrontal-accumbal catecholamines (CA) စံနစ် စိတ်ပိုင်းဖြတ် နှစ်ဦးစလုံးမှချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှု ဆုလာဘ်- နှင့် မနှစ်သက်မှု-ဆက်စပ် လှုံ့ဆော်မှု သာသည့်အခါ salience ချွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (UCS) ၏အရှင်သောဤအတည်ပြု, စဉ်ဆက်မပြတ်, CA activation သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မြင့်မားသည် စံနစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု ရွေးချယ်အလွန်အမင်းအဓိကဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။
keywords: လှုံ့ဆျောမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, salience, norepinephrine, dopamine, prefrontal cortex, mesoaccumbens
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီစိတ်ပညာနှင့် neuroscience အတွက်အရေးကြီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဦးဆောင်သည့်လမ်းတလျှောက်တွင်အရေးပါသောလမ်းဆုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုအကြောင်းကိုအများအပြားသစ်ကိုအသိအရိုးရှင်းသော drive ကိုပယ်ချခြင်းနှင့်မောင်း-လျှော့ချရေးသီအိုရီအများအပြားစိတ်ပညာရှင်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဦးဆောင်သည့်အခါမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသဘောတရားများကိုပု 1960s ထ။ တိကျသောအခြားရွေးချယ်စရာသီအိုရီမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီ (Bolles ၏ပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့ကြ 1972; Bindra, 1978; Toates, 1986, 1994; Panksepp, 1998; Berridge, 2001) ။ သုံး biopsychologists ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အဓိက incremental ပံ့ပိုးမှုများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Bolles (1972) တစ်ဦးချင်းစီမက်လုံးပေးမျှော်လင့်ထားခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ drives တွေကိုသို့မဟုတ် drive ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့အဆိုပြုထား။ Bolles က S-S ကိုခေါ်မက်လုံးပေးမျှော်လင့်ထား,* အသင်းအဖွဲ့များ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သိမြင်မှုခန့်မှန်းချက်ကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားတစ် hedonic ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ချက်များ, သင်ယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအလင်းသို့မဟုတ်အသံအဖြစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (S) မ,, (S ကိုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့ hedonic ဆုလာဘ်နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲတွဲဖက်မှုအားဖြင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်*), တစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကဲ့သို့သော။ အဆိုပါ S ရဲ့ S ကိုတစ်ဦးမျှော်မှန်းစေသော*။ အဆိုပါက S, Pavlovian သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦး conditional လှုံ့ဆော်မှု (CS သို့မဟုတ် CS +) ဖြစ်ခဲ့သည်ကို၎င်း, S ကို* တစ်ဦးခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (UCS) ။
Bindra (1974, 1978) မျှော်လင့်ချက်များလည်းဆုလာဘ်ရရှိရန်သိမြင်မှုနည်းဗျူဟာများရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်အံ့သောငှါအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်အကျိုးကိုများအတွက် CS အမှန်တကယ်ဂန္ထဝင်အေးစက်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, ပုံမှန်အားအကျိုးကိုသူ့ဟာသူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတူတူမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ် evokes ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာသင်ယူအသင်းအဖွဲ့ရိုးရှင်းစွာအကြိုးကိုမြျှောဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ဒါဟာအစတစ်ဦးချင်းတစ်ဦး hedonic ဆုလာဘ်အဖြစ် CS ရိပ်မိဖို့ဖြစ်ပေါ်စေလျက်, CS ရုံမူရင်း hedonic ဆုလာဘ်လိုအဖြစ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုထုတ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက CS ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ S ကိုပိုင်ကြောင်းတိကျတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ကြာမြင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်* သူ့ဟာသူ, ဤစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအထူးသမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။ ဒီမသာဆုလာဘ်ကို S များအတွက်စစ်မှန်သောခဲ့သတိပြုပါ*ဒါပေမယ့်လည်းနာကျင် S ကိုများအတွက်* ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆျောမှု။ Toates (1986) Bolles-Bindra အမြင်များကိုပြုပြင်ပြီးဇီဝကမ္မဆိုင်ရာကုန်ခမ်းမှုပြည်နယ်များသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှု၏မက်လုံးတန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဤသည်ကလှုံ့ဆော်မှု၏မက်လုံးတန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောဇီဝကမ္မလိုငွေပြမှုနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများအကြားတွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သို့သော်ဇီဝကမ္မလိုငွေပြမှုအချက်ပြမှုသည်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူကိုတိုက်ရိုက်မောင်းနှင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်ဆုလာဘ်၏ hedonic impact and incentive value ကိုချီးမြှင့်နိုင်သည်။*), နှင့်အကျိုးကို (CSS) အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုများကိုလည်း hedonic / မက်လုံးပေးတန်ဖိုး။ 1990 ပတ်လည်မက်လုံးပေး salience မော်ဒယ် (Berridge et al အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ , 1989; Berridge နှင့် Valenstein, 1991) ထိုမက်လုံးပေးအေးစက်များအတွက် Bindra-Toates စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့် "နဲ့တူ" အတူတူပဲဆုလာဘ် "လို" နှိုင်းယှဉ်မယ့်ဆုလာဘ်များအတွက်သီးခြားဦးနှောက်အလွှာသတ်မှတ်။ "ကဲ့သို့" မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ hedonic သက်ရောက်မှု-The အာရုံခံအပျော်အပါး-ဖြစ်ပေါ်ဥပမာ, ဆုလာဘ်၏ချက်ချင်းလက်ခံရရှိအသုံးပြုပုံမွှေးအရသာ (ခြွင်းချက်မရှိ "ကဲ့သို့") အခြေခံဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။
"လိုသော" သို့မဟုတ်မက်လုံးပေး salience, တူညီတဲ့ဆုလာဘ် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်၏စိတ်ခွန်အားနိုးမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည်, 1998), အမက်လုံးပေးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးမဟုတ်ဘဲယင်း၏ hedonic သက်ရောက်မှု။ အရေးကြီးသောအချက်ကြောင့် "ကဲ့သို့" နှင့်သာမန်အားဖြင့်အတူတူသွားရပေမယ့်သူတို့ကအထူးသဖြင့်အချို့ဦးနှောက်ထိန်းသိမ်းရေးအသုံးပြုပုံအချို့အခြေအနေတွေအောက်မှာကွဲနိုင်ပါတယ် "လို" ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် "လို" ဒါမပါဘဲ "လို" နိုငျ "ကြိုက်တယ်။ " မပါဘဲ "ကဲ့သို့"
လှုံ့ဆျောမှုသဘောတရားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြည်သို့မဟုတ်အခြားလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုကိုအပြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေရာတစ်လျှောက်စဉ်ဆက်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ အပြုအမူ, အားဖြည့်အကြိုးကိုခေါ်ကြသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆန္ဒရှိစစ်ကြောတော်မူသောသူတို့ကို (Skinner, 1953) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုစိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုသွေးဆောင်နိုင်, အရှင်, အမူအကျင့်အပေါ်ရှိပါတယ်, နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ၏ထောက်ပံ့သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်။
အဆိုပါမက်လုံးပေး salience မော်ဒယ်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏ဦးနှောက်ယန္တရားအဖြစ် dopamine (DA) function ကို၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။ , Ikemoto နှင့် Panksepp (အစားအစာ, လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါး, etc: အမှန်စင်စစ် DA ဖိနှိပ်မှုမှာအားလုံးမည်သည့်သာယာသောမက်လုံးပေးနီးပါးလှုံ့ဆျောမှုမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအရွက် 1999; Naranjo et al ။ , 2001; Berridge, 2004; Salamone et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့် accumbens nucleus မှမှန်းချက်ရဲ့သော DA လမ်းကြောင်း (NAc) ၏ neurochemical ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မှတဆင့်သို့မဟုတ်အဲဒီ receptor-blocking မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် mesolimbic DA စနစ်များပြတ်တောက်, သိသိသာသာမက်လုံးပေး salience လျော့နည်းစေခြင်းသို့မဟုတ်အရသာရှိတဲ့ဆုလာဘ်ကိုစားရန် "လို" ဒါပေမယ့်ကိုထိခိုက်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေကိုလျှော့ချမထားဘူး တူညီသောဆုလာဘ် (Pecina et al အတွက် "အကြိုက်" ၏။ , 1997; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998).
DA စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ DA အာရုံခံဆဲလျတစ်ခုမှာအမျိုးအစားဖြစ်ရပ်များဆုချီးနှင့်ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ (Bromberg-မာတင် et al အားဖြင့် inhibited အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး encodes ။ , 2010; Cabib နှင့် Puglisi-Allegra, 2012, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံရလဒ်များနှင့်တန်ဖိုးကိုသင်ယူမှုအကဲဖြတ်, ပန်းတိုင်ရှာကြံများအတွက်ဦးနှောက်စနစ်များကိုထောက်ခံပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အများဆုံး DA အာရုံခံလူသားများ, မျောက်နှင့်ကြွက် (Ikemoto နှင့် Panksepp အတွက် (မျှော်မှန်းသည်ထက်ဆိုလိုသည်မှာပိုကောင်းမျှော်မှန်းထားသည်ထက် / ပိုဆိုး) ဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကုဒ်များ bidirectional ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများခြင်းဖြင့် activated နေကြတယ် 1999; Ikemoto, 2007; Schultz, 2007) ။ ထိုကဲ့သို့သောလေကြောင်း Puff, hypertonic ဆားနှင့်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်အဖြစ် discrete ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနိုးတိရိစ္ဆာန်များ (Guarraci နှင့် Kapp အတွက် DA အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အချိုးအစားအတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုသက်ဝင်သွေးဆောင်ပေမယ့် 1999; ယောရှုသည် et al ။ , 2008; Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009), အရှိဆုံး DA အာရုံခံဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (Ungless et al နေဖြင့်စိတ်ကျရောဂါနေကြသည်။ , 2004; Jhou et al ။ , 2009) ။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ်တွေကွဲပြားခြားနားသော, လွတ်လပ်သောဆားကစ် (Margolis et al ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ , 2006; Ikemoto, 2007; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010) ။ DA အာရုံခံဆဲလျ၏ဒုတိယအမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးကိုအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ (Bromberg-မာတင် et al အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, စိတ်ခွန်အားနိုး salience encodes ။ , 2010).
အထောက်အထားများ DA အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများကွဲပြားမူအကငျြ့ (Matsumoto နှင့် Hikosaka အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြကြောင်းအကြံပြု 2009) နှင့် mesocorticolimbic DA system ကို DA ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထိခိုက် mpFC မှစီမံချက်များနှင့် NAc နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှပရိုဂျက်ပေါ်တွင်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုဖြန်ဖြေ NAc medial shell ကိုမှ DA စီမံချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး, တစ်ခုချင်းစီ motivationally သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားရှုထောင့်အားဖြင့်ပြုပြင်ထားသော, ကွဲပြားဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ shell ကိုယူဆရ saliency (Lammel et al ထင်ဟပ်, နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထိခိုက်။ , 2011) ။ ဒါဟာဝမ်နှင့် Tsien (ထို VTA DA အာရုံခံရငျးနှီးတွေကိုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်, နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများ processing များအတွက် convergence encoding ကမဟာဗျူဟာ employ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ပြသထားသည် 2011).
rostrally အဆိုပါ NAc ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှစီမံကိန်းများကိုအာရုံခံဆဲလ်အသေကောင်, အကျိုးကိုလမ်းကြောင်း (ပညာရှိတစ်ဦးမူလတန်း link ကိုကြောင်း, အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic စနစ်, 1996, 2004) ။ (သို့သော်, DA လွှတ်ပေးရန်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုပုံစံအားလုံးကိုအဘို့မလိုအပ်ပါဘူးအမြဲပျော်မွေ့စေ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ "ကြိုက်တယ်" မရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ရည်မှန်းချက်များသူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်လုပ်ရပ်များလှုံ့ဆျောမှု၏အဓိပ္ပာယ်မှာ "လိုချင်" ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်စေတဲ့အဘို့အရေးကြီးသည် Robinson နဲ့ Berridge, 1993, 2003; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Palmiter, 2008).
လှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအတွက် DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုလိုင်းအရပျ-အေးစက်ပါရာဒိုင်း (Mucha နှင့် Iversen ကနေကြွလာ 1984; ဗန် der Kooy, 1987; Carr က et al ။ , 1989) ။ ဤပါရာဒိုင်းသည် UCS (မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ) နှင့်တွဲဖက်ထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သုံးစွဲရသောအချိန်ပမာဏတိုးခြင်းကိုလှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများအညွှန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်ဆန့်ကျင်ဖက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တွဲနေသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ပါကသူတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် conditioned place preference (CPP) အကြောင်းပြောပြီး၊ ဒုတိယအခြေအနေတွင်မူ conditioned place ရွံရှာခြင်း (CPA) ဖြစ်သည်။ အေးဂျင့်များအသီးအသီး amphetamine block- amphetamine-conditioned place preferences နှင့်အတူ DA antagonists များကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည် (Nader et al ။ , 1997 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ တိရိစ္ဆာန်များသည်အခြားအမေရိကန် (Shippenberg နှင့် Herz နှင့်အတူရာအရပ်ကိုအေးစက်အတွက်ပုံမှန် CS-အမေရိကန်အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းနိုင်ပါလိမ့်ပြခဲ့ကြသောကြောင့်, ထိုရလဒ်များအထွေထွေသင်ယူမှုလိုငွေပြမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စကားပြန်မဟုတျပါ, 1988) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ပေါ်ဖို့ပုံမှန် DA ဂီယာလိုအပ်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ NAc ဖို့ VTA ထံမှလျှင် dopaminergic လမ်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု (Tsai et al များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဖြန်ဖြေအဆိုပါလမ်းကြောင်းတစ်မူလတန်း link ကိုဖြစ်ပါတယ်။ , 2009; Adamantidis et al ။ , 2011), ထို့နောက် DA-လွတ်လပ်သောဆုလာဘ်ဥပမာလည်းမရှိခဲ့ချေရပါမည်။ DA ၏လွတ်လပ်သောဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ဝင်စားကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု၏သို့သော်ဥပမာတစ်ခုအရေအတွက်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အမူအကျင့် pharmacological စမ်းသပ်ချက်တိုးပွားလာ mesolimbic DA ဂီယာနှိပ်စက်တ္ထုများရဲ့အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍပေမယ့်အဲဒီဒြပ်ပေါင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု (ယောသပ်သည် et al မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း DA-လွတ်လပ်သောဖြစ်စဉ်များလည်းရှိပါတယ်ညွှန်ပြ။ , 2003; ပီယပ်နှင့် Kumaresan, 2006 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ ဥပမာ, NAc ၏ DA ရန် pretreatment သို့မဟုတ် 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Ettenberg et al မသက်ရောက်ရှိသည်ဖို့အစီရင်ခံခဲ့ကြ။ , 1982; Pettit et al ။ , 1984; Dworkin et al ။ , 1988) နှင့်အီသနောပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Rassnick et al ပေါ်မှာ။ , 1993) ။ ကိုကင်းရာအရပ်ကိုဦးစားပေး (Spyraki et al အတွက် dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏မရှိခြင်း။ , 1982; Mackey နှင့်ဗန် der Kooy, 1985) စနစ်တကျသို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens အုပ်ချုပ်ရေး (Koob နှင့် Bloom, အောက်ပါအစီရင်ခံထားသည် 1988; Hemby et al ။ , 1992; ကာဣနနဲ့ Koob, 1993) ။ အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, DA-လွတ်လပ်သော opiate ရာအရပ်ကိုဦးစားပေး, (Mackey နှင့်ဗန် der Kooy သရုပ်ပြခဲ့ပြီး 1985; Bechara et al ။ , 1992; Nader et al ။ , 1994) ။ ထိုမှတပါး, DA-လစ်လပ်ကြွက် (တိကျတဲ့စမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက် Hnasko et al မော်ဖင်းအကိုက်များအတွက်ကြံ့ခိုင်သောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုဖော်ပြရန်။ , 2005), နှင့် DA opiate နုံပြည်နယ် (Laviolette et al တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။ , 2004; Vargas-ဖာရ et al ။ , 2009) ။ ကဖိန်းဓာတ်သည် DA-လွတ်လပ်သောဆုလာဘ်ယန္တရား (Sturgess et al ပြသလျက်ရှိသည်။ , 2010).
C2BL / 57 ကြွက်တွေမှာ Dopamine D6 အဲဒီ receptor နောက်ကောက် mutation အီသနော-မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာကြွက် (Ting-A-Kee et al အတွက်အီသနော-conditioning ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးပိတ်ဆို့ဖို့ပျက်ကွက်။ , 2009) ။ တစ်ဦးထက်ပိုသော "သဘာဝ" အခြေအနေများအတွက်အမျိုးသမီးကြွက်တွေမှာအထီး chemo-signal ကိုတို့ကအော်ပရေတာရာအရပျအေးစက် D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ရန် (Agustin-အဲဒီ့ et al အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ , 2007) ။ ဒါဟာ VTA-mediated သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိပေမယ် DA-လွတ်လပ်သောအပြုသဘောအားကောင်း (Field များ et al သရုပ်ပြခဲ့သည်။ , 2007).
DA-လွတ်လပ်သောလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူသည်ဤဥပမာအလေးအနက်ထား DA အားဖြည့်ဖြန်ဖြေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဘုံလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်အကြံပြုသောမူရင်း DA အယူအဆမေးခွန်းထုတ်သည်။
Prefrontal-accumbal catecholamines စနစ်က
ဆယ်စုနှစ်၏အကြောင်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့, သုတေသနသာယာသောသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (Le Moal ရှိမုန်, တုန့်ပြန် mesoaccumbens DA ဂီယာ၏ prefrontal catecholamines (CA) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှထောက်ပြထားပါတယ် 1991) ။ အထူးသဖြင့်, ထိုသို့သော NAc အဖြစ် subcortical အဆောက်အဦများ, အတွင်း DA ဂီယာ (Ventura et al တစ်ခု inhibitory လမ်းအတွက် DA mesocortical စနစ်ဖြင့် modulated ခံရဖို့ပုံရသည်။ , 2004,) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, အရှင်ပြင်းထန်စွာ mesoaccumbens DA တုံ့ပြန်မှုပြောင်းပြန်ဟာ mesocortical DA တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းအကြံပြု။
Mesoaccumbens DA ဂီယာ glutamatergic Project (Carr ကနှင့် Sesack မှတဆင့် prefrontal ဂီယာအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့အကြံပြုထားသည် 2000,) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, VTA (Sesack နှင့် Pickel မှ excitatory prefrontal-cortical စီမံကိန်း၏ activation မှတဆင့် 1990), နှင့် / သို့မဟုတ်တစ် corticoaccumbens glutamatergic Project (Taber နှင့် Fibiger ၏ activation မှတဆင့် 1995) ။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောတိုက်ရိုက် cortico-accumbal ဆားကစ်တစ်ခု cortico- (VTA) မှတပါး - ထိုသို့သော amygdala (ဂျက်ဆင်နှင့် Moghaddam အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာပါဝင်သော accumbal DA ကွန်ယက် 2001; Mahler နှင့် Berridge, 2011), accumbal DA မော်ဂျူအပေါ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုးဆယ်ခုနှစ်, ပြင်သစ်လေ့လာမှု (Darracq et al ။ , 1998) prefrontal cortical norepinephrine (NE) စနစ်တကျစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးမြှင့ accumbal DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ခဏမှီတိုင်အောင်, အပြုအမူထိန်းချုပ်ဦးနှောက် noradrenergic စနစ်ကပါဝင်ပတ်သက်မှု Locus Coeruleus (LC) လုပ်ငန်းဆောင်တာ (Aston-ဂျုံးစ် et al အပေါ်အများစုအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ , 1999) သို့မဟုတ် amygdala တို့ကစိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်စည်းမျဉ်း (McGaugh ပေါ်တွင် 2006) ။ Darracq နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရှေ့ဆောင်အလုပ်, အ NAc အတွက် DA ဂီယာကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက် medial prefrontal cortex (mpFC) တွင် NE နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်လုံးလုံးလြားလြားအကြံပြုသည်။ ဒီအမြင်, အတူတကွ accumbens အတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအပေါ် prefrontal DA ၏ထူထောင် inhibitory အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ subcortical DA ဂီယာအပေါ် prefrontal cortex အတွက်နှစ်ခု Amin ၏ဖြစ်နိုင်သောဆန့်ကျင်ဘက်အရေးယူအကြံပြုသည်။
ဒီအယူအဆထောက်ခံစမ်းသပ် C57BL /6၏ကြွက်ပေါ်မှာငါတို့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေသက်သေအထောက်အထား (C57) နှင့် DBA /2(DBA) inbred မျိုးကွဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇနောက်ခံအတွက် neurotransmitter လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပြုအမူများ၏နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သောမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများများ၏အာရုံကြောအခြေခံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အဓိကမဟာဗျူဟာပါစေ။ အဆိုပါ DBA နောက်ခံကြွက်တွေဟာ NAc (shell ကို) ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်တိုးမြှင့် accumbal DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကြွဆေး၏လှုံ့ဆော် / အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ရန် psychostimulant အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါတိုးမြှင့် extracellular DA မှညံ့ဖျင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်တိုးလာ locomotor လှုပ်ရှားမှုဖြင့်သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (Zocchi et al မှပြထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့် / လှုံ့ဆော်ဖို့အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြခဲ့ကြသည့် C57 နောက်ခံ၏ကြွက်တွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ , 1998; Cabib et al ။ , 2000) ။ C57 ခုနှစ်, Amphetanine အဆိုပါ NAc အတွက်အနိမ့် mpFC DA နှင့်မြင့်မားသော DA ထုတ်လုပ်, ဆန့်ကျင်ဘက် C57and မျှချင်းတိုးတက်ရေးပါတီသို့မဟုတ်ပင်တကြ် CPA ထက်နိမ့် locomotor လှုပ်ရှားမှုပြသသော DBA ကြွက်တွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, DBA ကြွက်များ၏ mpFC အတွက်ရွေးချယ် DA ကွယ်ပျောက်သွားစေသည့် NAc နှင့် Hyper ရွေ့လျားမြင့်မား DA ထွက်သွားဖို့ဦးဆောင်အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှု C57 ကြွက်ဤ strain ဆင်တူစေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ C57 နှင့် DBA မျိုးကွဲများအကြား NAc အတွက် DA ပို့ဆောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့မဟုတ်စကားရပ်မကွဲပြားမှု (Womer et al အစီရင်ခံခဲ့ကြ။ , 1994) ။ ဤရလဒ်သည်နှစ်ခုနောက်ခံအတွက် accumbal DA ထွက်သွားအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ DAT related ယန္တရားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်မူတည်မပြသခဲ့သည်။ သို့သော် microdialysis စမ်းသပ်ချက်စိတ်ကြွဆေးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက် C57 နှင့် DBA ကြွက်များ၏ mpFC အတွက် NE နှင့် DA ထွက်သွားတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ C57 DA ထက်ပိုမိုမြင့်မား NE တိုးပြသခဲ့သည်နေစဉ်, DBA ကြွက်အရှင်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင် NE / DA အချိုး DBA နှိုင်းယှဉ် C57 အတွက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းညွှန်ပြတစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံကိုတင်ပြ။ NE (Darracq et al ဖွင့်ခံရဖို့အကြံပြုနေစဉ် DA, DA NAc အပေါ် inhibitory ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ , 1998), ကျနော်တို့ imbalanced NE / DA အဆိုပါ mpFC အတွက် DBA ထက် C57 strain ပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုအောင်, အ NAc နှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူရလဒ်များအတွက် DA ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတွေးဆ။ ထိုသို့သောအယူအဆအယ်လ် Ventura et (ရွေးချယ် prefrontal cortical NE လျော့ကျ C57 ကြွက်တွေမှာ accumbens နှင့် CPP အတွက် DA အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းနောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်ချက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ , 2003), ရွေးချယ် prefrontal DA လျော့ကျ (ကြဲ NE) Ventura et al (C57 ၏သူတို့အားလုံးဝဆင်တူ DBA ကြွက်များတွင် NAc နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရလဒ်များအတွက် DA ထွက်သွားဖို့ဦးဆောင်နေစဉ်။ , 2004, 2005).
ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို NAc အတွက် DA ကဖွကြောင်း prefrontal cortical NE အသုံးပြုပုံကဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း DA ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ mpFC NE အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ချို့ယွင်းခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ် prefrontal NE ဂီယာ, စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အစိုးရိမ်ရကြောင်းညွှန်ပြ Ventura et al (C57 ကြွက်ကုန်ခမ်း။ , 2003).
စာပေများတွင်သို့သော်သက်သေအထောက်အထား (Ventura et al ။ , 2002 ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် C57 နှင့် DBA ကြွက်ပေါ်မှာငါတို့ Lab ထဲမှာရရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်ရလဒ်များကိုဒီဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများ (ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, အတင်းအဓမ္မရေကူး) အတွက်မှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့ကြောင်း, ထို NAc အတွက် DA ကျော်ကိုအနည်းဆုံးအဖြစ်ဝေး prefrontal DA ထိန်းချုပ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာကျနော်တို့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု mesocortical နှင့် mesoaccumbens အကြားချိန်ခွင်လျှာကိုအုပ်စိုးမျိုးရိုးဗီဇထိန်းချုပ်မှုဖေါ်ပြခြင်း, mesoaccumbens DA C57 ကြွက်တွေမှာ mesocortical DA ဇီဝြဖစ်၏တစ်ဦးအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သော activation ဖြင့်လိုက်ပါသွားလွှတ်ပေးရန်, နှင့် DBA strain ၏ကြွက်တွေမှာဆန့်ကျင်ဘက်၏တားစီးထုတ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ စိတ်ဖိစီးမှုမှ DA တုံ့ပြန်မှု (Ventura et al ။ , 2001) ။ ထိုမှတပါး, C57 ကြွက်ပေမယ့်မ DBA strain ၏ကြွက်တွေဟာအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှု (FST) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် mesocortical DA ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့် mesoaccumbens DA ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိ၏တားစီး၏ချက်ချင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သော activation နှင့်အတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံအပေါ် immobility တစ်ခုအလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုပြသသည်။ ထို့အပြင်အမူအကျင့်များနှင့် C57 ကြွက်တွေမှာ FST ဖို့ mesoaccumbens DA တုံ့ပြန်မှုဟာ mpFC (Ventura et al အတွက်ရွေးချယ် dopamine DA လျော့ကျအသုံးပြုပုံအသီးသီးလျှော့ချခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်ခံခဲ့ရသည်။ , 2002).
Prefrontal NE ဂီယာ, arousal, အာရုံစူးစိုက်မှု, လှုံ့ဆျောမှု, သင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် (Sara နှင့် Segal အပါအဝင်အများအပြား cortical functions များ, ထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများခဲ့သည် 1991; Tassin, 1998; Feenstra et al ။ , 1999; Arnsten, 2000; Robbins, 2000; Bouret နှင့် Sara, 2004; Dalley et al ။ , 2004; Mingote et al ။ , 2004; Tronel et al ။ , 2004; Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Cohen ကို, 2005; Rossetti နှင့် Carboni, 2005; Lapiz နှင့် Morilak, 2006; ဗန် der Meulen et al ။ , 2007; Robbins နှင့် Arnsten, 2009) ။ ထို့အပွငျအားဖြည့် / အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှု PFC အတွက် NE လွှတ်ပေးရေး (Finlay et al တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်။ , 1995; Dalley et al ။ , 1996; စတိန်း et al ။ , 1996; Jedema et al ။ , 1999; Kawahara et al ။ , 1999; McQuade et al ။ , 1999; Feenstra et al ။ , 2000; စာမျက်နှာနှင့် Lucky, 2002; Morilak et al ။ , 2005; Feenstra, 2007) ။ ဤရွေ့ကားအထောက်အထားများ, CA prefrontal ဂီယာ, စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအတွက်ကိုလည်း accumbens အတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့ထိုက်တန်တဲ့အယူအဆ DA ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာနှစ်ခုလွတ်လပ်သောဓါတ်ခွဲခန်းပြုခြင်းနှင့် 2007 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ, ဝတ္ထုစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုဖြန့်ချိ NE (Nicniocaill နှင့် Gratton ၏မြင့်မားသဖြင့် prefrontal cortical alpha-1 adrenergic receptors (ARS) ၏ activation မှတဆင့် NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ 2007; Pascucci et al ။ , 2007) ။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဝတ္ထုဖိအားတွေနဲ့အတွေ့အကြုံ mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရေး (Pascucci et al ၏တိုးမြှင့်မှုနဲ့အပြိုင်သော mpFC အတွင်း NE လွှတ်ပေးရန်အတွက်, လျင်မြန်သောဧရာမနှင့်ယာယီတိုးအားပေးအားမြှောက်။ , 2007) ။ prefrontal cortical NE ၏တစ်ဦးရွေးချယ်လျော့ကျအယ်လ် Pascucci et (ထိခိုက် prefrontal cortical DA လွှတ်ပေးရန်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်အဖြစ် Basal CAS အဆင့်ဆင့်စွန့်ခွာခြင်း, cortical NE တုံ့ပြန်မှုများနှင့် accumbal DA အတွက်တိုးနှစ်ဦးစလုံးကာကွယ်ပေးသည်။ , 2007) ။ ထို့အပြင် mpFC သို့ alpha-1 AR ရွေးချယ်ရန် benoxathian ၏ applications များ, အ NAc ထိုး-ရသည် (Nicniocaill နှင့် Gratton အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် 2007) ။ Pascucci et al ။ (2007) ကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင် NAc DA လွှတ်ပေးရန် mpFC DA ၏ activation အားဖြင့်သတ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် DA လျော့ကျ (Deutch et al ဖြစ်စေ။ , 1990; ဒိုဟာဆီနှင့် Gratton, 1996; ရှငျဘုရငျ et al ။ , 1997; Pascucci et al ။ , 2007) သို့မဟုတ် mpFC (ဒိုဟာဆီနှင့် Gratton အတွက်ရွေးချယ်ရန်၏ပြုတ်ရည်များက D1 receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, 1996) ကို NAc အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒါဟာ mpFC အတွက် DA အဆိုပါ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်နှင့် mesocortical DA တွေပျက်စီးမှု mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရေး (Deutch et al ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် activation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းလူသိများသည်။ , 1990; ဒိုဟာဆီနှင့် Gratton, 1996; ရှငျဘုရငျ et al ။ , 1997) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဝတ္ထုစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများစဉ်အတွင်း mpFC NE နှင့် DA ၏ဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့် mesoaccumbens DA တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်သည်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုကွဲပြားခြားနားသောရောဂါဗေဒအခြေအနေများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏ဒေတာကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ သည်ညီမျှမှုအရေးယူကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပင်ဆန့်ကျင်ဘက်အမူအကျင့်နှောင့်အယှက်မှဦးဆောင် mesoaccumbens DA အားဖြင့် hyper- သို့မဟုတ် hypo-တုံ့ပြန်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါသော်လည်းအမှန်မှာထို mpFC အတွက်နှစ်ခု CAS ၏မျှမျှတတအရေးယူကျန်းမာဖြေရှင်းဘို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
နှစ်ခု CAS အားဖြင့်တိုကျရိုကျ cortical အချိုမှု (GLU) ၏ဖြစ်နိုင်သောဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူမှစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများကိုမှတ်နေစဉ်အတွင်း NAc အတွက် DA ဂီယာအပေါ် mpFC NE နှင့် DA နေဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ mpFC alpha-1 ARS သို့မဟုတ် D1 receptors ၏ပိတ်ဆို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် GLU တိုး (Lupinsky et al အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကတည်းက။ , 2010), ကတိုကျရိုကျ cortical NE နှင့် DA ဖြစ်နိုင်သည် mpFC (Del Arco နှင့် Mora အတွက်ဂါဘမြို့သား interneurons ၏ glutamatergic ဆွမှတဆင့် mpFC output ကိုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများကွိုးစားအားထုကြောင်းဖွယ်ရှိသည် 1999; Homayoun နှင့် Moghaddam, 2007).
စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း NAc အတွက် DA လွှတ်ရာ prefrontal NE ထိန်းချုပ် alpha1-ARS များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, (စိတ်ဖိစီးနေဖြင့်သွေးဆောင်တကဲ့သို့) prefrontal cortical NE တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးသည်ဤအနိမ့်-ဆှဖှေဲ့ receptors Subtype သက်ဝင်စေဖို့နိုင်စွမ်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် ပျော့တိုးမွငျ့မားဆှဖှေဲ့ alpha2- သို့မဟုတ် beta1- ARS (Ramos နှင့် Arnsten, ကိုသက်ဝင်နိုင်စဉ် 2007) ။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (Darracq et al အားဖြင့် mesoaccumbens DA activation အတွက် alpha1-ARS ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ , 1998; Ventura et al ။ , 2003; Nicniocaill နှင့် Gratton, 2007), နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက် prefrontal NE ၏အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ, မောက်အတွက် CPP ကလေ့လာမှုအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း (Ventura et al ။ , 2003), လှုံ့ဆော်အပြုအမူများနှင့်ဖြေရှင်းတွင်ဤ receptors ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှအချက်။ mpFC နှင့် NAc VTA DA ဆဲလ်၏ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေထဲကနေ DA afferents ခံယူနှင့်ဤကွဲပြားခြားနားသောဆားကစ် (ယောလနှင့် Weiner ကထိန်းချုပ်ထားကြသည် 1997; Carr ကနှင့် Sesack, 2000; Lewis နှင့် O'Donnell, 2000; Margolis et al ။ , 2006; Lammel et al ။ , 2008; Tierney et al ။ , 2008) ။ VTA လည်း amygdala (CeA) ၏ဗဟိုနျူကလိယကနေ afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံ; ဤအရပ်မှ VTA ရန်၎င်း၏ inhibitory input ကို၏ CeA ၏တားစီးလျက်, NAc DA (Ahn နှင့် Phillips ကတစ်ခုတိုးစေပါတယ်, 2003; Phillips က et al ။ , 2003a), ဒီ input ကိုနှစ်ဆတားစီးယန္တရား (Fudge နှင့် Haber ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြံပြု, 2000; Ahn နှင့် Phillips က, 2002; Floresco et al ။ , 2003; Fudge နှင့် Emiliano, 2003) ။ အဆိုပါ mpFC အတွက် NE afferents LC ၏ဆဲလ် (Aston-ဂျုံးစ် et al ၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေအစပြုတာဖြစ်တယ်။ , 1999; Valentino နှင့်ဗန် Bockstaele, 2001; Berridge နှင့် Waterhouse, 2003) ။ LC, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအခွအေန (Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Cohen ကိုအတူသိမြင်မှု / အမူအကျင့်ပြည်နယ်များ fit မှ NE အာရုံခံအတွက် phasic နှင့်လုပ်သူများသည် Modes အကြားအကူးအပြောင်းမောင်းထုတ်ရန်အကြံပြုခဲ့ကြရသော orbito-တိုကျရိုကျနှင့် cingulate cortex ကနေခိုင်မာတဲ့ convergence Project, အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 2005) ။ LC လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း CeA (Curtis et al အားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ , 2002) ကို pericoerulear ဒေသ (Berridge နှင့် Waterhouse ၏ innervation မှတဆင့် 2003) နှင့် excitatory corticotropin-releasing ဟော်မုန်း (ဗန် Bockstaele et al မှတဆင့်။ , 2001; Bouret et al ။ , 2003; Jedema နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2004) ။ NE က၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုပေါ်နှင့် alpha1 နှင့် alpha2 receptors (Briand et al ၏ဖြန့်ဝေပေါ် မူတည်. ပစ်မှတ် cortical ဒေသများအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်။ , 2007; Arnsten, 2009) ။ တစ်ဦး neuromodulator ကွဲပြားခြားနားကြောင့်မြှင့်လုပ်ဆောင်သည့် receptors ပေါ် မူတည်. ၎င်း၏ပစ်မှတ်ငျဒသေကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဒါအမှန်စင်စစ်လုပ်သူများ neuromodulator လွှတ်ပေးရန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့် differential cortical အလွှာအကြားတည်ရှိသောဖြစ်ကြောင်း receptors သက်ရောက်သည်။
ယခုတိုင်အောင်စဉ်းစားအဆိုပါအထောက်အထားများတစ် prefrontal, CA System ကိုလွတ်လပ်စွာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများ၏ valence ၏ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်, ရှိသမျှလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများတစ်ခွဲ cortical ဧရိယာကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်အလားတူ prefrontal-accumbal စည်းမျဉ်းကြိုး (စိတ်ကြွဆေး) သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိ (စိတ်ဖိစီးမှု) လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပြသလျက်ရှိသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ cortical NE အရေးပါတယ်လို့အစားအစာနှင့်ဆန္ဒရှိ pharmacological သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အခြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးပါသည် prefrontal ကြောင်းစမ်းသပ်အထောက်အထားများမှတဆင့်, ဒီမြင်ကွင်းကိုမှသိသိသာသာထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် NAc DA အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်ကြောင်း prefrontal NE သရုပ်ပြကြောင့်လာမယ့်အပိုဒ်မှာပြပါလိမ့်မည်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
appetitive- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက် Prefrontal NE- accumbal DA
မောက်နှင့် mpFC အတွက်ရွေးချယ် NE လျော့ကျအပေါ် intracerebral microdialysis အပေါ်အခြေခံပြီးစမ်းသပ်ချက်များကပြထားတဲ့အတိုင်းသည်အခြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, စိတ်ကြွဆေးအပြင်, prefrontal NE မှတဆင့် NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်။ ရွေးချယ် NE လျော့ကျသယ်ဆောင်ထွက်ခဲ့ neurotoxin 6-hydroxydopamine နှင့် 12909% NE အကြောင်းကိုထုတ်လုပ်သောရွေးချယ် DA Transporter blocker GBR-90 နှင့်အတူ Pre-ကုသမှုအားဖြင့် DA မသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပျက်စီးခြင်းကို afferents ။ အဲဒီ receptor စည်းမျဉ်းများတွင်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲများကိုရှောင်ရှားရန်, neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခွဲစိတ်ကုသရာမှတဦးတည်းသီတင်းပတ်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ မော်ဖင်းအကိုက် (Ventura et al ။ , 2005), ကိုကင်း (Ventura et al ။ , 2007), အီသနော (Ventura et al ။ , 2006, ပြင်ဆင်မှုမှာ) mpFC အတွက် NE ၏ထိုး-မှီခိုတိုးနှင့် NAc အတွက် DA တစ်ဦးအပြိုင်တိုးသွေးဆောင်ပြပြီ။ ရွေးချယ် prefrontal NE လျော့ကျအရှင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအားဖြင့်သွေးဆောင် accumbal DA activation အတွက် mpFC အတွက် NE ၏အရေးပါအခန်းကဏ္ဍအတည်ပြုခြင်း, NAc အတွက် prefrontal NE နှင့် DA နှစ်ဦးစလုံး၏ထွက်သွားတိုးဖျက်သိမ်း။ ဒါဟာအပေါငျးတို့သအကဲဖြတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ NE ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်မထိခိုက်သော mpFC အတွက် DA ထွက်သွားတိုးလာသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ သို့သော်တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ, စိတ်ကြွဆေး) သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့် NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် prefrontal DA ၏လူသိများ inhibitory အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အခြေခံပြီး, NE mpFC ၏ NAc အတွက် DA တိုး၏ပျက်ကွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလက်ခံရရှိဘာသာရပ်များကုန်ခမ်းသော hypothesize စေခြင်းငှါ NE ၏မရှိခြင်းအတွက် prefrontal DA ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့ inhibitory အရေးယူမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအမြင်, cortical NE ကုန်ခမ်းသောအခါ accumbal DA "flatting" ကိုဦးဆောင်ကာ inhibitory အခန်းကဏ္ဍကွိုးစားအားထုမယ်လို့ mpFC အတွက် DA တစ်ဦးဖြည့်စွတ်အခန်းကဏ္ဍမှသို့သော်ညွှန်ပြ, accumbal DA အပေါ် prefrontal NE ၏အခန်းကဏ္ဍ "မြှင့်တင်ရန်" ကိုအလွန်အရေးပါအတည်ပြုလိမ့်မယ်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေအုပ်ချုပ်ထွက်ခဲ့သည် mpFC အတွက် NE နှင့် DA ၏ concomitant လျော့ကျရွေးချယ် NE ကွယ်ပျောက်သွားအကြောင်းမဲ့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် AMPH လက်ခံရရှိကြွက်များတွင်ချို့ယွင်း accumbal DA လွှတ်ပေးရေးကိုပြောင်းလဲတော်မမူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြည့်စွတ်စမ်းသပ်ချက်များက။ သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ် prefrontal cortex အတွက် DA noradrenergic ဆိပ်ကမ်း (Devoto et al ထံမှ NE နှင့်အတူပူးတွဲဖြန့်ချိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ , 2001, 2002) ။ ထို့အပွငျဒီဦးနှောက်ဧရိယာ၌ DA ပုံမှန် NE Transporter (Tanda et al ခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ , 1997; Moron et al ။ , 2002) ။ ကြွက်နှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိသောအချက်အလက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစု, အဗဒ္ဒုန် noradrenergic ဆိပ်ကမ်းကနေဖြန့်ချိ DA ၏ဖွယ်ရှိလျှော့ချမှုကြောင့်၎င်း၏လျှော့ချလွှာမှမှ DA ၏တိုးပွားရရှိနိုင်သဖြင့်လျော်ကြေးငွေကြောင်းအကြံပြု, Basal extracellular DA အပေါ် NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းပြသ ဤအဆိပ်ကမ်း (Ventura et al ။ , 2005; Pascucci et al ။ , 2007) ။ သို့သျောလညျး, NE-ကုန်ခမ်းကြွက်အရှင်ကြောင်း prefrontal noradrenergic နှင့် dopaminergic စီမံချက်များ function uncoupled ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, Sham တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ပြသကြောင်းနဲ့ဆင်တူမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာရေးနှင့်အတူသဘောတူညီချက်မှာတော့ကြွက်များတွင်ရွေးချယ် prefrontal NE လျော့ကျစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်အကျိုးသက်ရောက်စေမရွေးချယ် DA လျော့ကျစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် NE လွှတ်ပေးရန်မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာနှစ်ဦးစလုံး (မော်ဖင်းအကိုက်ဆေးထိုး) အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိ (စိတ်ဖိစီးမှုခွအေနအေ) အခြေအနေများတွင်, mpFC အတွက် NE နှင့် DA လွှတ်ပေးရန်လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒါကသက်သေအထောက်အထား NE မသက်ဆိုင်ဘဲမူလလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျသော pharmacological သို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများ၏, ထို NAc အတွက် DA activation သွေးဆောင်ဖို့လှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအစားတုံ့ပြန်ရန်တစ်ဘုံစညျးမဉျြးဥပဒြပ်စင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွန်ယက်ကိုဒြပ်စင်ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဤတွင်ကြောင့်သာယာသောလှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအစားအဖြစ်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုဘုံ prefrontal cortical-subcortical ကွန်ယက်ကိုသက်ဝင်စေနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း။ အထဲကထောက်ပြဖို့ထိုက်သည်
လှုံ့ဆျောမှုအတွက် mesoccumbens DA စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း prefrontal NE နှင့် accumbal DA ပတျသကျတဲ့စနစ်, တစ်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်ရှိမရှိ, စမ်းသပ်ထောက်ခံမှုလိုအပ်နေပါသည်။ မက်လုံးပေးသင်ယူမှုနှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုလေ့လာဖို့, နေရာအေးစက်လေ့ကြွက်များနှင့်ကြွက်များအတွက်အမြတ်ထုတ်ပေမယ့်အများအားဖြင့်ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာနေအတွက်အသုံးပြုကြသည်အော်ပရေတာဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကြွက်များတွင်အခက်အခဲများ၏နံပါတ်တင်ပြကတည်းကနောက်ဆုံးမျိုးစိတ်အတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းလမ်းကိုစိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုသာယာသော (အစာစားချင်စိတ်) သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) တစ်ခုခုကိုနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဦးစားပေးနေရာပတ်ဝန်းကျင် (CS) ခဲ (CPP က) အကြားပထမဦးဆုံးအမှုတစ်စုံ, ဒုတိယအသီးအနှံရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) တွင်နေစဉ်။ စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာယခင်ကအမေရိကန်နှင့်တစ်ဦးကြားနေပတ်ဝန်းကျင် (Tzschentke နှင့်အတူတွဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြားရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်သည့်အခါပြ preference ကို (သို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်) ဖြင့်တိုင်းတာသည်, 1998; Mueller နှင့် Stewart က, 2000) ။ ဤနည်းလမ်းကိုသုဉ်းပြီးနောက်တွင်လည်းယခင်က preference ကို (သို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်) မှ relapse အကဲဖြတ်ရန်အသုံးဝင်သည်နှင့်မော်ဒယ်စွဲ (Lu et al အတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ , 2003; Shaham et al ။ , 2003) ။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦးရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လေ့လာမှု NAc အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် DA ထွက်သွားတိုးခြင်း, လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ချို့ယွင်း CPP က impairing မှတပါးကြောင့်ရွေးချယ် prefrontal cortical NE ကွယ်ပျောက်သွားပြသခဲ့သည်။ ကွယ်ပျောက်သွားတိရိစ္ဆာန်များမော်တာအပြုအမူအတွက်အတုအယောင်ထိန်းချုပ်မှုကနေမတူညီတဲ့မဟုတ်ကြလျှင်, ရှောင်ရှားခြင်းစမ်းသပ်မှု (Ventura et al အားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှု၏နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းကဒါတွေကသက်ရောက်မှု, မော်တာလိုငွေပြမှု, ဒါမှမဟုတ်သင်ယူချို့ယွင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ကြ။ , 2003).
ထို့အပြင်ဤရလဒ်များကိုနဂိုအတိုင်း prefrontal cortical NE ရွေးချယ်စရာစမ်းသပ်မှုအတွက်ငွိမျးမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ reinstatement (relapse) အဘို့နှင့်အီသနောစားသုံးမှုများအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်, ကင်း, ဒါမှမဟုတ်အီသနောအဖြစ်အားဖြင့်သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့က prefrontal NE စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုဖို့လှုံ့ဆျောမှု salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အလွန်အရေးပါသည်ကိုသရုပ်ပြပါ။
သို့သော်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများကိုရည်မှတ်ရလဒ် accumbal DA activation ၏ noradrenergic ထိန်းချုပ်မှု (ဆုချီး) သာယာသောနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘုံကွန်ယက်ကိုအကြံပြုခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်လည်းထင်ရှားကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒီအယူအဆအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအတွက်ကျွန်တော်ကြွက်များတွင်စနစ်တကျအုပ်ချုပ်နေတဲ့ pharmacological ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုထိုကဲ့သို့သော lithium chloride တို့ရွေးချယ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသော accumbens အတွက် mpFC နှင့် DA အတွက် NE ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့-cut တိုးသွေးဆောင်ကြောင်းလေ့လာသည်။ ထိုမှတပါး, prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့တကြ် CPA သွေးဆောင်လီသီယမ်, အရှင်ကြောင်း prefrontal NE အတည်ပြုခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွေ့အကြုံကို (Ventura et al နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အလွန်အရေးပါသည်။ , 2007).
Next ကိုခြေလှမ်းကျနော်တို့ကသဘာဝမဟုတ်တဲ့ pharmacological လှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက် prefrontal-accumbal, CA စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာရရှိသောပဏာမရလဒ်တွေကိုတို့ကအကြံပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအားကောင်းအရှင်ပိုပြီးအဓိက, စာပေများတွင်ယခင်ဒေတာကြောင့်အစာစားချင်စိတ် hypothesize ခွင့်ပြုခဲ့သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု prefrontal noradrenergic ဂီယာတစ်တန်းကို Activation ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် prefrontal NE လွှတ်ပေးရန် Feenstra et al (ဖြစ်လိမ့်မည်။ , 2000; Ventura et al ။ , 2008 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက် prefrontal NE လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်မှု salience တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကြောင်း prefrontal NE-accumbal DA system ကိုထောကျပံ့ဖို့ကျနော်တို့ဆန္ဒရှိ Non-pharmacological အတွေ့အကြုံကိုအဖြစ် (သာယာသော၏သူတို့အားအပြိုင်သက်ရောက်မှုများကိုနိုင်ရန်အတွက်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်မယ့်ဖိအား (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလင်းအိမ်) ကိုအသုံးပြုဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအတွက်လည်းစိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အလွန်အရေးပါသည် ရှေ့တော်၌ဖော်ပြထားအရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာများကဲ့သို့အကြိုး) လှုံ့ဆော်မှု။ နှစ်ခုဖိအားငါတို့သည်သူတို့ကအေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွာခြားကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည့် pulsating ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလင်းအိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Non-pulsating အလင်းအိမ်ထက်ပိုမိုဆန္ဒရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်သောအရပ်ဌာနအေးစက်ပဏာမစမ်းသပ်မှုအတွက်။ ဤရလဒ် prefrontal cortical NE လွှတ်ပေးရေးအပေါ်နှစ်ခုဆန္ဒရှိအခြေအနေများ၏သက်ရောက်မှု paralleled ။ နှစ်ဦးစလုံးအလင်းရောင်အခြေအနေများ prefrontal NE လွှတ်ပေးရန်တိုးလာပေမယ့် Non-pulsating အလင်းရောင်ထက်ပိုပြီးသိသာတိုးထုတ်လုပ်အလင်းရောင် pulsating ။ ထိုမှတပါး, mpFC အတွက် noradrenergic တုံ့ပြန်မှု NAc (Ventura et al ။ , ပြင်ဆင်မှုအတွက်) အတွက် DA ၏တန်းတိုးခြင်းဖြင့် paralleled ခဲ့သည်။
နေရာအရပ်အေးစက်အတွက်အမေရိကန်အဖြစ်အသုံးပြုစာစားချင်စိတ်ကို Non-pharmacological လှုံ့ဆော်မှုလျှင်ထိုအခါကျနော်တို့လိုအပ်နဂိုအတိုင်း prefrontal NE-accumbal DA စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အ functioning, အကဲဖြတ်။ ကျနော်တို့ကြွက်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှု, ကြွက် MCh-ချောကလက်မှတွဲကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် WCh နှင့်အတူတွဲပတ်ဝန်းကျင်ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ CPP ကပါရာဒိုင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့ preference ကိုအတွက်နွားနို့ (MCh) -chocolate မှအဖြူချောကလက် (WCh) ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိကြပါပြီ ။ တသမတ်တည်း, intracerebral microdialysis Ventura et al (WCh စားသုံးမှုမှထိတွေ့မှု MCh ထက် mpFC အတွက်ပိုမိုမြင့်မား NE လွှတ်ပေးရန်ထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ , 2008, ပြင်ဆင်မှုမှာ) NAc တစ်ဦးထက်ပိုသောရေရှည်တည်တံ့ DA ထွက်သွားလိုက်ပါ။ ဤရလဒ်သည် prefrontal NE နှင့် accumbal DA တစ်တန်းထုံးစံ၌, သာယာသောသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဖြစ်စေကွဲပြားခြားနားသောအဓိကလှုံ့ဆော်မှု, တုံ့ပြန်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ကနှိုးဆွသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူရင်ဆိုင်သောအခါမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီသက်ရှိများ (ဆာလောင်မွတ်သိပ်, ရေငတ်, ပင်ပန်း, တပ်လှန့်စသည်တို့ကို) ၏စိတ်ခွန်အားနိုး status ကို၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများပြုလုပ်မူးယစ်ဆေး Prime, မက်လုံးပေးသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် relapse ဖို့တုန့်ပြန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်စနစ်များအတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် neuro-လိုက်လျောညီထွေဘို့, စွဲမော်ဒယ်များကိုရည်မှတ်အထူးသဖြင့်သူတို့အား၌များစွာသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုမှ Pre-ထိတွေ့ထိုလှုံ့ဆော်မှု၏ salience နှင့် prefrontal-accumbal, CA စနစ်၏တုန့်ပြန် "ရိပ်မိ" နှင့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်လျှင်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါကကျနော်တို့အံ့ဩကြ၏။ ကျနော်တို့နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်အစားအစာ-ကန့်သတ် regimen အသုံးပြုသောလည်း Cabib et al (စိတ်ကြွဆေးဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲပြသနှင့်, ကြွက်များတွင်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုထိခိုက်စေခဲ့။ , 2000; Guarnieri et al ။ , 2011) ။ အစားအစာကန့်သတ် (FR) mpFC အတွက်ပိုမိုမြင့်မား NE လွှတ်ပေးရန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အတွက် NAc အတွက်ပိုမိုမြင့်မား DA လွှတ်ပေးရန်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီအတိုးအရှင်သက်ရှိများ၏ပြည်နယ်, မျှော်မှန်းထားသည်အတိုင်း, လှုံ့ဆော်မှု appetitive ဖို့တုံ့ပြန်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်။ ဖေါ်ပြခြင်း, WCh ထိတွေ့အခမဲ့-ကျွေးမွေး (non-FR) ကြွက်အားဖြင့်ပြသကြောင်းနဲ့ဆင်တူခဲ့သည် ဒီသက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးအရေးပါတယ်လို့စေမယ်လို့အစားအစာဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ဖို့သိသာ ascribed နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ FR regimen လွတ်လပ်စွာအစားအစာ-related ယန္တရား၏, ထိုရိပ်မိ salience ထိခိုက်စေသောအနေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခွအေနေကြောင်းဖော်ပြသည်။ အမှန်မှာကျနော်တို့ FR (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလင်း pulsating) ကပိုပြီးအဓိကဖိအားများက Non-FR ကြွက်များတွင်ထုတ်လုပ်သက်ရောက်မှုများကိုဆင်တူနည်းအဓိကဖိအား (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလင်း) ကသွေးဆောင်သက်ရောက်မှုကိုဖန်ဆင်းကြောင်းလေ့လာသည်။ မသက်ဆိုင်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု-related ယန္တရားများ၏, (အစားအစာအကြိုး) နှင့်ဆန္ဒရှိ (စိတ်ဖိစီးမှုအလင်းရောင်) လှုံ့ဆော်မှုဒါက FR သာယာသောနှစ်ဦးစလုံး၏ salience တိုးမြှင့်ဖို့နိုင်စွမ်းဆိုလိုသည်။ အပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုအတွက် Sham နှင့် NE အရှင် MCh-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမဖွစျနိုငျကွောငျးကိုညွှန်ပြ, FR တိရစ္ဆာန်များ၏သူတို့အားအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့စားစရာမျှမ-related နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကို (လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေ) အားအကြောင်းမဲ့ကြွက်ကုန်ခမ်းသတိပြုပါ အစားအသောက်ကန့်သတ် (Ventura et al ဖို့ homeostatic တုံ့ပြန်မှုမှ ascribed ။ , 2008) ။ အစားအစာကန့်သတ်လည်းယေဘူယျ drive ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု (တို့သည် et al မှဦးဆောင်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ , 2006; Phillips က et al ။ , 2007) ထိုလှုံ့ဆော်မှု "ဝါဒီများကိုစွမ်းအား" လိမ့်မယ်။ ဤသည်ယန္တရားဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ပြည်နယ်များအပေါ်မူတည်ပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုသို့သော်သီးခြားလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ခြင်းမပြုမီအစားအသောက်-ကန့်သတ် regimen ကနေထုတ်လုပ်တာယေဘူယျ drive ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအစာစားချင်စိတ် alimentary လှုံ့ဆော်မှုဒါပေမယ့်လည်းဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမသာအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ညွှန်ပြ တကယ်တော့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလင်း၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုအခမဲ့-ကျွေးမွေးကြွက်တွေမှာထက်အစားအစာ-ကန့်သတ်အတွက်အားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးယေဘူယျ drive ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများနှစ်ဦးစလုံးထိန်းညှိဘုံအာရုံကြောယန္တရားများပါဝင်သင့်ပါတယ်။
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များ prefrontal-accumbal, CA တုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်ဒါမှမဟုတ်သက်ရှိများ၏ပြည်နယ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားအဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအညွှန်းကိန်းကြောင်းပြသပါ။ prefrontal NE ၏အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောတုံ့ပြန်မှုယခင်ရလာဒ်များနှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိ၏နှင့်ကွဲပြားခြားနားအဓိကလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက် prefrontal-accumbal, CA စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍသိရှိနိုင်ရန်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ တူညီသည့်အကြောင်းအရာများပေါ်ရှိအခြားလေ့လာချက်များ၏စမ်းသပ် Paradigm အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့သည်, CA တုံ့ပြန်မှုအပေါ်နှင့်နေရာအေးစက်ဖြင့်တိုင်းတာစိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုပေါ်ရွေးချယ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကကျွန်တော် NE လျော့ကျတသမတ်တည်းယခင်စမ်းသပ်ချက်အတူ prefrontal cortical NE လွှတ်ပေးရေးနှင့် accumbal DA တို့၏စီးပွါးကိုဖျက်သိမ်းပြီးကြောင်းလေ့လာသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ WCh ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နို့ချောကလက်ထိတွေ့အစားအစာ-ကန့်သတ် (FR) တိရိစ္ဆာန်များ (MCh; မြင့်မားသော salience နှစ်ခုစလုံးအခြေအနေများ) တွင်ရာအရပ်ကို preference ကို (CPP က) တားဆီးသော်လည်းမထိတွေ့ Non-FR (အခမဲ့-ကျွေးမွေး) တိရိစ္ဆာန်များအတွက် MCh (အနိမ့် salience) ။ ဒါပေမယ့်မရ IL (အနိမ့် salience ထိတွေ့မဟုတ်တဲ့ FR တိရိစ္ဆာန်များအတွက်; ထိုမှတပါး, အလင်း (IPL) pulsating နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလင်း (မြင့်သော salience IL); ထိတွေ့သည့် FR တိရိစ္ဆာန်များအတွက် intermittent ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နေရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) တားဆီးပုံ Figure11).
(; MCh + FR ကန့်သတ်အစားအစာထဲမှာနို့ချောကလက်; ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အဖြူရောင်ချောကလက်, WCh ထိန်းချုပ်နို့ချောကလက်, MCh) နှင့် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ချောကလက်အားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) တွင် prefrontal cortical norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ ...
ဤရလဒ်သည်ကြောင်း PFC NE လျော့ကျအရှင်ပြင်းထန်သောစိတ်ခွန်အားနိုး salience ဖြစ်ပါတယ်အခါ prefrontal-accumbal, CA System ကိုရွေးချယ်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ညွှန်း, ထို UCS ၏ salience စဉ်ဆက်မပြတ်, CA activation သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မြင့်မားသည်တဲ့အခါမှသာစိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုထိခိုက်စေသောပြသ လုပ်ငန်းများ၌။ Salience (Horvitz နှိုးဆွခံရဖို့လှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်, 2000) ။ အဓိကလှုံ့ဆော်မှုအနေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူ switch ကို (Zink et al ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သိမြင်မှုအရင်းအမြစ်များ၏ reallocation စေ။ , 2006) ။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွပါကတစ်ဦးအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူ switch ကိုဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပိုအဓိက။ လူသားများတွင်လတ်တလောအစီရင်ခံစာ Zink et al (striatum အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှအရင်းအမြစ်များ၏ reallocation ချက်ချင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းပြသကြ။ , 2003, 2006) ။ ၎င်း၏ "ကြီးကြပ်ရေးမှူး" function မှသို့သော် prefrontal cortex, အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ခဲ့ကြကြောင်းဗဟိုအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်, ဒေတာ ventral striatum (သို့မဟုတ် NAc) နှင့် prefrontal cortex နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင် processing များအတွက်ဘုံအလွှာဖွဲ့စည်းကြောင်းညွှန်ပြ 1998; Darracq et al ။ , 1998; Becerra et al ။ , 2001; Jensen et al ။ , 2003; Kensinger နှင့် Schacter, 2006; Borsook et al ။ , 2007), နှင့်လူသားများတွင် neuroimaging လေ့လာမှုများ prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ (O'Doherty et al ။ , ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် 2001; အသေးစား et al ။ , 2001; Killgore et al ။ , 2003; ဝမ် et al ။ , 2004) နှင့် striatum (ဂျင်ဆင် et al ၏။ , 2003; Zink et al ။ , 2006; Borsook et al ။ , 2007) သဘာဝကအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated နေကြသည်။ တနည်းကား, ကျနော်တို့ယခင်ကအယ်လ် Ventura et (NAc အတွက် DA ၏မော်ဂျူမှတဆင့်ကသဘာဝ (အစားအစာကန့်သတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်) နှင့် pharmacological ဆုလာဘ် related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှအဖြစ် pharmacological ခြင်းကိုမနှစ်သက် related လှုံ့ဆော်မှုမှနဂိုအတိုင်း NE prefrontal ဂီယာစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့လိုအပ်သောကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်, အလွန်အမင်းအဓိကလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်တကြ် CPA အပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘယ်သူ၏ activation ခြွင်းချက်မရှိကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိအလွန်အမင်းအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်စိတ်ခွန်အားနိုးတစ်အလွှာဖြစ်ပါတယ် prefrontal-accumbal, CA စနစ်၏ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည် salience ။ သို့သော်အခြားသောဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitters စေ့စပ်ခံရဖို့များပါတယ်။ ထို့ကြောင့် amygdala စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု၏ pavlovian အေးစက်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်အတွေ့အကြုံများနှိုးဆွသောအဘို့မှတ်ဉာဏ်ပြောင်းလဲပစ်အတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍ (Balleine, ကစားချိန် မှစ. 2005; Balleine နှင့် Killcross, 2006; McGaugh, 2006), နှင့်ဤဦးနှောက်ဧရိယာနှင့် prefrontal cortex (Cardinal et al အကြားရှုပ်ထွေးခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပေးထားသော။ , 2002; ဟော်လန်နှင့် Gallagher, 2004; Roozendaal et al ။ , 2004) ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံအလွန်အမင်းအဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တစ်ဦး prefrontal Cortex-amygdala စနစ်၏တစ်အခန်းကဏ္ဍ Belova et al (စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ , 2007).
စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏အရည်အချင်းတစ်ခု UCS (Dallman et al ၏ salience နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ , 2003; Pecina et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်ပိုအဓိကအနေနဲ့ UCS ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်တစ်ဦး (To--အေးစက်ခြင်းကို) ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုကနေတဆင့်နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မည်။ မတိုင်မီကအတွေ့အကြုံကို Borsook et al (ဆိုပေးထားလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု၏အဓိကပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ , 2007) နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်စိတ်ခံစားမှု arousal ကနဦးသိမှုဆိုင်ရာအာရုံ encoding ကနှင့်စုစည်းပြီးလုပ်ငန်းစဉ် (Anderson က et al နှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းမိုးလှုံ့ဆော်မှုအားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည်။ , 2006; McGaugh, 2006) ။ ကျနော်တို့လွတ်လပ်စွာ valence ၏, သာအလွန်အမင်းအဓိကခြွင်းချက်မရှိသဘာဝအလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်, CA ထွက်သွား၏ခွန်အားကြီးတိုးသွေးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူများအခြေအနေများအောက်တွင် reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှ prefrontal-accumbal, CA ဂီယာစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့လိုအပ်သောကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ရွေးချယ် prefrontal NE လျော့ကျထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အလေးပေးအုပ်စုများအတွက်ရစေရန်အဓိကလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ MCh နှင့် IL) ကအလွန်အမင်းအဓိကလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ WCh နှင့် IPL) ကသွေးဆောင်ရာအရပ်အေးစက်ဖျက်သိမ်း, ဒါပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မျှသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများထိတွေ့ခဲ့ ပျော့အဓိကလှုံ့ဆော်မှုရန်။ ဤရလဒ်သည်ကြောင်း prefrontal-accumbal, CA ဂီယာအလွန်အမင်းအဓိကကသဘာဝကြိုးသို့မဟုတ်နေရာတစ်နေရာ-အေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုမှ conditional ဂုဏ်သတ္တိများ၏ဝယ်ယူဘို့လိုအပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အတော်များများကကွဲပြားခြားနားသောအချက်များ (အတွင်းပိုင်းဟာသက်ရှိများ၏ variable တွေကို (ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု) နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်နှစ်ဦးစလုံး၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဂုဏ်သတ္တိများ (ဆိုလိုသည်မှာ salience သို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှု), အပါအဝင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်အဓိကစည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍရှိသည် Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင် , 1998; ရစ်ချတ်နှင့် Berridge, 2011) ။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကအယ်လ် Belova et ( "valence ပြင်းထန်မှု affective မှအထိခိုက်မခံလုပ်ငန်းစဉ်များအဘို့အရတော့ထုံးစံ (salience) သော်လည်းမ" အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိဦးနှောက်စနစ်များကိုတစ်ဦးအတွက်ပြုမူကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ။ , 2007), အရှင်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလ valence ၏တစ်ဘုံအာရုံကြောစနစ်ကလှုံ့ဆော်မှု salience processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ ထိုမှတပါး, valence-တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူကြောင်းနှိုးဆွသောသာယာသောသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု Belova et al (ကဘုံ, valence-အာရုံမခံစားနိုင်သောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အာရုံစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးမြှင့်တင်ရန်အကြံပြုထားသည်။ , 2007) နှင့် prefrontal cortex နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (Rolls, processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး 2000; O'Doherty et al ။ , 2001; Killgore et al ။ , 2003; Ventura et al ။ , 2007).
NAc အတွင်း Dopaminergic ဂီယာ, ဆုလာဘ်သို့မဟုတ် (Everitt နှင့် Robbins သင်ယူခြင်းဆုလာဘ်အချို့ရှုထောင့်များ၏ hedonic သက်ရောက်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စဉ်းစားသည် 2005 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမြင် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို, 1998), NAc အတွက် DA ဂီယာနှစ်မျိုးလုံးအပြုသဘောနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းပြသ; အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သို့သော်, သူတို့ကဒီစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်ကို prefrontal cortical NE ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
mpFC အတွက် Norepinephrine VTA DA ဆဲလ် (Sesack နှင့် Pickel မှ excitatory prefrontal cortical projection မှတဆင့် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရေးကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ, 1992; ရှီ et al ။ , 2000) နှင့် / သို့မဟုတ် corticoaccumbal glutamatergic Project (Darracq et al မှတဆင့်။ , 2001) ။ ဒီနျူကလိယ VTA DA အာရုံခံ (Grenhoff et al ကိုသက်ဝင်ပြထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုမှတပါး, တစ်ဦး excitatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားထုတ်အတွက် LC မှ mpFC စီမံကိနျးအတှကျတစ်အခန်းကဏ္ဍမျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်။ , 1993; ဂျူဒို et al ။ , 1998; Liprando et al ။ , 2004), အရာ NAc အတွက်တိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ သို့သော် amygdala, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ Pavlovian အေးစက်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်အတွေ့အကြုံများ (Balleine နှင့် Killcross နှိုးဆွသောအဘို့မှတ်ဉာဏ်ပြောင်းလဲပစ်အတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍကတည်းက 2006; McGaugh, 2006), နှင့်ဤဦးနှောက်ဧရိယာနှင့် prefrontal cortex (Cardinal et al အကြားရှုပ်ထွေးခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပေးထားသော။ , 2002; Roozendaal et al ။ , 2004), ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံအလွန်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက် prefrontal Cortex-amygdala စနစ်၏တစ်အခန်းကဏ္ဍ Belova et al (စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ , 2007; Mahler နှင့် Berridge, 2011).
NAc နှင့် dopaminergic ဂီယာ DA မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆာပသင်ယူမှု (Salamone et al ၏အခြားရှုထောင့်များတွင်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍမှတပါးလှုံ့ဆျောမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍမှထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ , 2005) ။ အမှန်စင်စစ်ကြောင်း DA တစ်ဦးတည်းသာ function ကိုဆောင်ရွက်, သိသိသာသာအထောက်အထားများ DA အားထုတ်မှုသို့မဟုတ်အားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (Salamone et al ၏ခေတ္တခဏတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ accumbens သံသယသောအမြင်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ , 2007; Bardgett et al ။ , 2009), ကြောင်းဆာပသင်ယူမှု, မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု, သို့မဟုတ် pavlovian-ဆာပအပြောင်းအရွှေ့၌ဤစနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်မဟုတ်ပါဘူး။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်စနစ်များအကြားတစ်ဦးဒီကဗျာတူညီရန်ညွှန်ပြအတူတကွ accumbal DA ၏အားထုတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလက်တွေ့တွေ့ရှိချက် DA စနစ်များကိုအပြုအမူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြကြောင်းအတွက်ဆုံဟန် တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသား (Salamone et al အတွက်စွမ်းအင်အလုပ်မဖြစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဖြစ်စဉ်များ။ , 2007) ။ ဒီအမြင် NAc လုပ်ငန်းဆောင်တာအရကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းညှိဦးနှောက် circuitry ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် prefrontal cortex နှင့် amygdala အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမူဘောင်တှငျကြှနျုပျတို့မျှော်မှန်းထားသော prefrontal / accumbal, CA စနစ်ကပဋိသန္ဓေ ယူ. လှုံ့ဆျောမှုရလဒ်များကိုထိန်းချုပ်အားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် cortical နှင့် subcortical ဦးနှောက်ဧရိယာများပါဝင်သောတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဖြစ်နိုင်သည်အားထုတ်မှုပြင်းထန်မှုမှ salience ပြင်းထန်မှုချိတ်ဆက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ရိပ်မိသည့် salience ရန်, စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ကိုတွက်ချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလွန်အရေးပါသည်။ ဒါကလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် UCS ထိတွေ့ကြောင့်အရှင်စိတ်ခံစားမှု salience ၏အခြေခံအခန်းကဏ္ဍမှညွှန်ပြ, လှုံ့ဆျောမှုရလဒ်ကိုမှဦးဆောင်အသင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလစ်လျူရှုထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန်ဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့ salience ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ခွန်အားနိုး salience ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်အဆိုပြုအဆိုပါ prefrontal / accumbal system ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်ကိုရိပ်မိစိတ်ခံစားမှု (Phillips က et al ထိန်းညှိရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်များတွင်ထည့်သွင်း။ , 2003b) ။ အဆိုပါအကဲဖြတ်သီအိုရီအရသိရသည်စိတ်ခံစားမှုအမြင်, (အာနိုး, 1960; လာဇရု, 1991တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျ၏ဖော်ထုတ်ခြင်း, ထိုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များ၏ထုတ်လုပ်မှု, နှင့်ထိခိုက်စေပြည်နယ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း:) သုံးဖြစ်စဉ်များကနေအဓိကအားထားရန်အကြံပြုထားသည်။ လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်စာပေ (Phillips က et al အားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း။ , 2003b ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့် amygdala, insula, ventral striatum, ventral နှင့် dorsal anterior cingulate gyrus, အ septo-hippocampus စနစ်, prefrontal cortex အဖြစ် mesencephalic, cortical နှင့် subcortical အပါအဝင်ဦးနှောက်ဧရိယာများပါဝင်သောကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များအပေါ်မူတည် အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေး (Salzman နှင့် Fusi ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအားလုံး 2010) ။ အဆိုပါ septo-hippocampus system ကိုကွဲပြားခြားနားသောရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ (Grey ကနှင့် McNaughton အကြားပဋိပက္ခ၏အတိုင်းအတာအဆုံးအဖြတ်အတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအထွေထွေ-ရည်ရွယ်ချက်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး 2000) ။ Amygdala စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှု arousal ပေါ် မူတည်. မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးလူသိများတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချ၌ဤဧရိယာ၏အခန်းကဏ္ဍမျှော်မှန်းထားသည်။ အမှန်မှာထို amygdala ထိုကဲ့သို့သော striatum ကဲ့သို့သောအခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးအကျိုးသက်ရောက်အားထုတ်နိုင်စွမ်းသောအခြေအနေများတုံ့ပြန်မှုကျလာသောနိုင်ပြီး, Pavlovian အေးစက်အတွက်ရိပ်မိစိတ်ခံစားမှုတန်ဖိုးများဆာ (အလေ့အကျင့်-based နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထား) ကအမြတ်ထုတ်နေကြတယ်သင်ယူမှုယန္တရားများနှင့် prefrontal cortex (Seymour နှင့် Dolan, 2008).
"တန်ဖိုးများ" amygdala အပေါ်, ထိုကဲ့သို့သော glucocorticoids အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြ, ဤသက်ရောက်မှုစိတ်ခံစားမှု salience နှင့်အမှတ်တရများ၏ခွန်အား (Roozendaal ကြား link တစ်ခုမှညွှန်ပြမှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးထိန်းချုပ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် 2000; Setlow et al ။ , 2000; McGaugh, 2005) ။ ထို့အပြင် glucocorticoids, ဆုလာဘ် (Piazza နှင့် Le Moal ၏ဇီဝအလွှာဖြစ်ပြခဲ့ကြ 1997) နှင့်သိသိသာသာအထောက်အထားများသူတို့အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိ discrete-cue သင်ယူမှု၏မော်ဂျူညွှန်းစာစားချင်စိတ်ကိုနှင့်ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများနှစ်ဦးစလုံး၏မော်ဂျူအတွက်အခန်းကဏ္ဍတခုဘုံယန္တရား (Zorawski နှင့် Killcross က subserved စေခြင်းငှါ play ကြောင်းပြသ 2002).
ကျနော်တို့အရှင်ရစေရန်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ခွန်အားနိုး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကာစွပ်စွဲကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောစနစ်ညွှန်ပြ, prefrontal-accumbal, CA System ကိုပြင်းထန်သောစိတ်ခွန်အားနိုး salience လုပ်ငန်းများ၌သောအခါရွေးချယ်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို DA ဂီယာပြခဲ့သောသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ (အမြဲ Nader et al လှုံ့ဆျောမှုတှငျပါဝငျမဟုတ်ပါဘူး။ , 1997, ပြန်လည်သုံးသပ်) ။ ဆုလာဘ်တစ်ခု Single-system ကိုမော်ဒယ်အပျေါအခွခေံသော DA အယူအဆနှငျ့မတူဘဲ, non-ဆုံးရှုံး / ဆုံးရှုံးမော်ဒယ်တစ်ဦးစေသည်ဦးချင်းစီ၏နှစ်ခုသီးခြား neurobiological ဆုလာဘ်စနစ်များကိုနှစ်ဆ dissociated နိုင်မလုပ်ပဲသောနှောင်းပိုင်းတွင်ကိုးဆယ်အတွက်အဆိုပြုပြီးပါပြီ ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြည်နယ်ပေါ် မူတည်. လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူမှသိသိသာသာအလှူငွေ။ စံပြမူးယစ်ဆေးနုံတိရိစ္ဆာန်များ Nader et al (ကွဲပြားခြားနားဆုံးရှုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟုဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်အစားအစာ-ကန့်သတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များကနေ, အစားအစာ- ့. (ဆိုလိုသည်မှာ non-ဆုံးရှုံး) အလားတူထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရာ။ , စမ်းသပ်ချက်ကထောက်ခံကြောင်းမှတ်ချက် 1997; Laviolette et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါမော်ဒယ်နှစ်ခုအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာနှစ်ခုစနစ်များအကြားဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုတစ်ဦးကပြည်နယ် [သည့် peduncolo-pontine နျူကလိယ (TPP) ပါဝင်သော] non-ချို့တဲ့မှုစနစ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နှစ်ခုစနစ်များ၏ differential ကို activation အထူးသတိရိစ္ဆာန်များရှိမရှိအပေါ် predicated ဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ, ဆုတ်ခွာတစ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်မ, Nader et al ဖြစ်ကြသည်။ , 1997) ။ ဒုတိယဆိုလိုဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ပြည်နယ် DA ဖြစ်ပါတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောတစ်စက္ကန့် neurobiologically ကွဲပြားစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်, ပါဝငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီ model ကနေပေါ်ပေါက်သောသိသာမေးခွန်းတစ်ခုကိုအားလုံးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကို non-ဆုံးရှုံးပြီးချို့တဲ့အစိတ်အပိုင်းရှိသည်ဖို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အားပေးထောက်ခံသူတွေ (Nader et al ခြင်းဖြင့်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်အဖြစ်။ , 1997ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်) -“ လှုံ့ဆော်မှုအချို့သည်စနစ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုတည်းကိုသာလုပ်သည်မဟုတ်လား” ဤဆွေးနွေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအလုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှမဟုတ်သော်လည်း prefrontal-accumbal CA system နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအကြားရှိအပြိုင်အဆိုင်ကိုသတိမပြုမိရန်ကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ပါ၊ လှုံ့ဆော်မှု salience မြင့်မားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောစိတ်ခံစားမှုသက်ရောက်မှု (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်စေ) ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအခါ။ ဤကိစ္စမျိုးတွင်ဆားငန်သောပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအခြားစနစ်တစ်ခုကိုတားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်“ အော့ဖ်လိုင်း” နှင့်ဆားငန်နှုန်းနည်းပါးခြင်း (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းထားခြင်းမရှိသေးပါက) အွန်လိုင်းလိုင်းရှိစနစ်သည်တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းခံရသည်။ အနိမ့်စိတ်ခံစားမှုသက်ရောက်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအနေဖြင့်လည်းအသုံးမချရသေးသောမော်ဒယ်များအတွက်အကြံပေးသကဲ့သို့မြင့်မားသောလန်းလန်းသောအချက်များ (prefrontal-accumbal CA system) ကိုပြုပြင်သည့်စနစ်နှင့်အနိမ့်ကျသောဆားငန်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်ဟုယူဆရသူများသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤစနစ်များ၏ ရွေးချယ်၍ သီးသန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်၏စည်းကမ်းချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည် mpFC တွင် NE စီးဆင်းမှု၏မြင့်မားသောမြင့်မားမှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသော AR-subtypes များပါဝင်နိုင်သည်။ လွှတ်ပေးသော NE ၏သတ်မှတ်ထားသောအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောဆားကစ်များနှင့်ထိတွေ့မှုရှိလိမ့်မည်။ ဤသည်အရေးကြီးသောဤမေးခွန်းကိုရှင်းလင်းလိမ့်မည်ဟုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသုတေသန Ministero della Ricerca Scientifica အီး Tecnologica (PRIN 2008), Sapienza တက္ကသိုလ် (Ricerca, 2010), နှင့် Ministero della နှုတ်ဆက် (Ricerca corrente, 2009-2011) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Adamantidis AR, Tsai HC, Boutrel ခ, Zhang ကအက်ဖ်, Stuber GD, Budygin အေ, Tourino C. , Bonci အေ, Deisseroth ကေ, က de Lecea L. (2011) ။ အပြုအမူရှာကြံဆုလာဘ်၏မျိုးစုံအဆင့်၏ dopaminergic မော်ဂျူ၏ Optogenetic စစ်ကြောရေး. ဂျေ neuroscience. 1, 10829-10835 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2246-11.2011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Agustin-အဲဒီ့ C. , Martinez-Rico ဂျေ, Martinez-Garcia ကအက်ဖ်, Lanuza အီး (2007) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ပင် pheromones-mediated ဆုလာဘ်အပေါ် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ: "။ အကြိုက်" dopamine-လွတ်လပ်သော၏အသစ်တခုအမှု ပြုမူနေ။ neuroscience. 121, 920-932 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.121.5.920 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ahn အက်စ်, Phillips က AG က (2002) ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာမွတ်မပြေနိုင်သောရန်အစာကျွေး၏ dopaminergic ဆက်စပ်မှု၏အလယ်ပိုင်းနှင့် basolateral amygdalar အရေးပါနေဖြင့် Modulation accumbens နှင့် prefrontal cortex medial. ဂျေ neuroscience. 22, 10958-10965 ။ [PubMed]
Ahn အက်စ်, Phillips က AG က (2003) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Basal နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး-evoked dopamine efflux ၏လွတ်လပ်သောမော်ဂျူနှင့်ကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်းနှင့် basolateral amygdalar အရေးပါနေဖြင့် prefrontal cortex medial. neuroscience 116, 295–305. doi: 10.1016/S0306-4522(02)00551-1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Anderson က AK, Wais PE, Gabrieli JDE (2006) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြားနေဖြစ်ရပ်များအတိတ်အောက်မေ့ပိုကောင်းစေပါတယ်. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 103, 1599-1604 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0506308103 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အာနိုးကို MB (1960) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ နယူးယောက်, NY: ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Arnsten AFT (2000) ။ prefrontal cortical function ကို၏ differential ကို noradrenergic မော်ဂျူ: အရှာဖွေနေဖန်တဆင့်. အာရုံကြော Plast. 7, 133-146 ။ Doi: 10.1155 / NP.2000.133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Arnsten AFT (2009) ။ prefrontal cortex ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအယှက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းအချက်ပြစိတ်ဖိစီးမှု. နတ်။ ဗျာ neuroscience. 10, 410-422 ။ Doi: 10.1038 / nrn2648 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aston-Jones ဟာဂျီ, Cohen ကို JD (2005) ။ locus coeruleus-norepinephrine function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ: သပ္ပါယ်အမြတ်နဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်. အမ်း။ ဗျာ neuroscience. 28, 403-450 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.28.061604.135709 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aston-Jones ဟာဂျီ, Rajkowski ဂျေ, Cohen ကိုဂျေ (1999) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက် locus coeruleus ၏အခန်းက္ပ. Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 46, 1309–1320. doi: 10.1016/S0006-3223(99)00140-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Balleine BW (2005) ။ အစားအစာ-ရှာ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများ: corticostriatolimbic ဆားကစ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ, arousal နှင့်ဆုလာဘ်. Physiol ။ ပြုမူ. 86, 717-730 ။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2005.08.061 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Balleine BW, Killcross အက်စ် (2006) ။ စင်ပြိုင်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့: amygdala function ကိုတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံအမြင်. ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience. 29, 272-279 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2006.03.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bardgett ME, Depenbrock အမ်, Down N. , အမ်, အစိမ်းရောင် L. (2009) ထောက်ပြသည်။ Dopamine ကြွက်များတွင်အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ modulates. ပြုမူနေ။ neuroscience. 123, 242-251 ။ Doi: 10.1037 / a0014625 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Becerra L. , Breiter HC, ပညာရှိ R. , Gonzalez RG, Borsook ဃ (2001) ။ noxious အပူလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဆုလာဘ် circuitry activation. အာရုံခံဆဲလျ 32, 927–946. doi: 10.1016/S0896-6273(01)00533-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bechara အေ, Harrington အက်ဖ်, Nader K. , ဗန် der Kooy ဃ (1992) ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ neurobiology: မူးယစ်ဆေး-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များနှိုင်းယှဉ်နုံအတွက် opiate ဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေနှစ်ခုစိတ်ခွန်အားနိုးယန္တရားများ၏နှစ်ဆ dissociation. ပြုမူနေ။ neuroscience. 106, 798-807 ။ [PubMed]
Belova MA, Paton JJ, Morrison လုပ် SA, Salzman ဃ (2007) ။ မျှော်လင့်မျောက် amygdala အတွက်သာယာသောနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု modulates. အာရုံခံဆဲလျ 55, 970-984 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2007.08.004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge CW, Waterhouse bd (2003) ။ အဆိုပါ locus coeruleus-noradrenergic system ကို: အမူအကျင့်ပြည်နယ်၏မော်ဂျူနှင့်ပြည်နယ်မှီခိုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ. ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 42, 33–84. doi: 10.1016/S0165-0173(03)00143-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC (2001) ။ "ဆုကြေးသင်ယူမှု: အားဖြည့်, မက်လုံးများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ," in သင်ယူပြီးတက်ကြွတဲ့၏စိတ်ပညာ, vol ။ 40, Medin DL, အယ်ဒီတာ ed ။ (နယူးယောက်, NY: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း;), 223-278 ။
Berridge KC (2004) ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience အတွက်လှုံ့ဆျောမှုသဘောတရားများ. Physiol ။ ပြုမူ. 81, 179-209 ။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2006.08.020 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE (1998) ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 28, 309–369. doi: 10.1016/S0165-0173(98)00019-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, Valenstein ES (1991) ။ အဘယ်အရာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ၏လျှပ်စစ်ဆွခြင်းဖြင့် evoked နို့တိုက်ကျွေးရေး mediates? ပြုမူနေ။ neuroscience. 105, 3-14 ။ [PubMed]
Berridge KC, Venier IL, ရော်ဘင်ဆင် TE (1989) ။ 6-hydroxydopamine-သွေးဆောင် aphagia ၏ reactivity ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရသာ: dopamine function ကို၏ arousal နှင့် anhedonia ယူဆချက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်. ပြုမူနေ။ neuroscience. 103, 36-45 ။ [PubMed]
Bindra ဃ (1974) ။ သင်ယူမှု, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအမြင်. Psychol ။ ဗြာ. 81, 199-213 ။ [PubMed]
Bindra ဃ (1978) ။ ဘယ်လိုသပ္ပါယ်အပြုအမူထုတ်လုပ်: တုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်မယ့်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ-လှုံ့ဆျောမှုကအခြားရွေးချယ်စရာ. ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ. 1, 41-91 ။ [PubMed]
Bolles RC (1972) ။ အားဖြည့်, မျှော်မှန်းနှင့်သင်ယူမှု. Psychol ။ ဗြာ. 79, 394-409 ။
Borsook ဃ, Becerra L. , Carlezon WA, Jr. ကို Shaw အမ်, Renshaw P. , Elman ဗြဲ, Levine ဂျေ (2007) ။ analgesia နှင့်နာကျင်မှုအတွက်ဆုလာဘ်-ခြင်းကိုမနှစ်သက် circuitry: စိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက်ဂယက်ရိုက်. အီးယူအာရ်။ ဂျေနာကျင်မှု 11, 7-20 ။ Doi: 10.1016 / j.ejpain.2005.12.005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bouret အက်စ်, Duvel အေ, Onat အက်စ်, Sara အက်စ် (2003) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအားဖြင့် locus ceruleus အာရုံခံ၏ Phasic activation. ဂျေ neuroscience. 23, 3491-3497 ။ [PubMed]
Bouret အက်စ်, Sara SJ (2004) ။ ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထား, သင်ယူနေစဉ်အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် locus coeruleus-medial တိုကျရိုကျ cortex ဆက်စပ်မှုတွေ၏တိမ်းညွတ်. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 20, 791-802 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2004.03526.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Briand L. , Gritton အိပ်ချ်, Howe WM, လူငယ်တို့ဃ, Sarter အမ် (2007) ။ သိမှတ်ခံစားမှုအဘို့အဖျော်ဖြေပွဲအတွက် Module: အ prefrontal cortex အတွက် modulator တွေကို interaction က. prog ။ Neurobiol. 83, 69-91 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0807891106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto အမ်, Hikosaka O. (2010) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် Dopamine: ဆုချီးဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျး. အာရုံခံဆဲလျ 68, 815-834 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2010.11.022 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cabib အက်စ်, Orsini C. , Le Moal အမ်, Piazza PV (2000) ။ ပယ်ဖျက်ရန်နှင့်အကျဉ်းအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက် strain ခြားနားချက်များပယ်ဖျက်ခံရ. သိပ္ပံ 289, 463-465 ။ Doi: 10.1126 / science.289.5478.463 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cabib အက်စ်, Puglisi-Allegra အက်စ် (2012) ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအတွက် mesoaccumbens dopamine. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 36, 79-89 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2011.04.012 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကာဣန SB, Koob gf (1993) ။ D-3 dopamine receptors မှတဆင့်ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Modulation. သိပ္ပံ 260, 1814-1816 ။ Doi: 10.1126 / science.8099761 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာခန်းမဂျေ, Everitt BJ (2002) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 26, 321–352. doi: 10.1016/S0149-7634(02)00007-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carr က DB, Sesack SR (2000) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာဖို့ကြွက် prefrontal cortex ကနေ projections: mesoaccumbens နှင့် mesocortical အာရုံခံအတူ Synaptic အသင်းအဖွဲ့များအတွက်တိကျတဲ့ပစ်မှတ်ထား. ဂျေ neuroscience. 20, 3864-3873 ။ [PubMed]
Carr က GD, Fibiger အိပ်ချ်, Phillips က AG က (1989) ။ "မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ် conditional ရာအရပျ preference ကို," in Psychopharmacology အတွက်အောက်စဖို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, eds Leibman JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ။ (အောက်စ်ဖို့, ဗြိတိန်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း;), 264-319 ။
Curtis အေ, Bello N. , Connolly K. , Valentino R. (2002) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ Corticotropin-releasing အချက်အာရုံခံနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများက locus coeruleus activation ဖျန်ဖြေ. ဂျေ Neuroendocrinol. 14, 667-682 ။ Doi: 10.1046 / j.1365-2826.2002.00821.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dalley JW, Cardinal RN, Robbins TW (2004) ။ ကြွက်များတွင် Prefrontal အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို: အာရုံကြောနှင့် neurochemical အလွှာ. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 28, 771-784 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2004.09.006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dalley JW, Mason ဆိုကေ, စတန်းဖို့ဒ် SC (1996) ။ သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ကြွက်၏တိုကျရိုကျ cortex အတွက် extracellular noradrenaline ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်: diazepam ၏စူးရှသောစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်မော်ဂျူသို့မဟုတ် buspirone. Psychopharmacology (Berl ။ ) 127, 47-54 ။ Doi: 10.1007 / BF02805974 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dallman MF, Pecoraro N. , Akana SF, la Fleur SE, ဂိုမက်ဇအက်ဖ်, Houshyar အိပ်ချ်, ဘဲလ် ME, Bhatnagar အက်စ်, Laugero KD, Manalo အက်စ် (2003) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်း: "နှစ်သိမ့်အစာ" ၏အသစ်တစ်ခုအမြင်. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 100, 11696-11701 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1934666100 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Darracq L. , Blanc G. အ, Glowinski ဂျေ, Tassin JP (1998) ။ D-စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင်သည့် locomotor အတွက် noradrenaline-dopamine နားချင်းဆက်မှီ၏အရေးပါမှု. ဂျေ neuroscience. 18, 2729-2739 ။ [PubMed]
Darracq L. , Drouin C. , Blanc G. အ, Glowinski ဂျေ, Tassin JP (2001) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် metabotropic ၏ stimulation သော်လည်းမ ionotropic glutamatergic receptors accumbens အလုပ်လုပ်တဲ့ dopamine ၏ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်. neuroscience 103, 395–403. doi: 10.1016/S0306-4522(00)00578-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
del Arco အေ, Mora အက်ဖ် (1999) ။ အဆိုပါလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက် extracellular ဂါဘမြို့သားများ၏ပြင်းအား, dopamine နှင့် dopamine metabolites အပေါ် endogenous အချိုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: NMDA နှင့် AMPA / ka receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု. Neurochem ။ res. 24, 1027-1035 ။ Doi: 10.1023 / A: 1021056826829 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Deutch AY, Clark က WA, Roth RH အ (1990) ။ Prefrontal cortical dopamine လျော့ကျစိတ်ဖိစီးမှုမှ mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏တုန့်ပြန်ပိုကောင်းစေပါတယ်. ဦးနှောက် Res. 521, 311–315. doi: 10.1016/0006-8993(90)91557-W. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Devoto P. , Flore G. အ, Pani L. , Gessa GL (2001) ။ အဆိုပါနှောက် cortex အတွက် noradrenergic အာရုံခံထံမှ noradrenaline နှင့် dopamine ၏ Co-လွှတ်ပေးရန်သက်သေအထောက်အထား. Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 6, 657-664 ။ Doi: 10.1038 / sj.mp.4000904 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Devoto P. , Flore G. အ, Pira L. , ဒိုင်ယာနာအမ်, Gessa GL (2002) ။ စူးရှသောမော်ဖင်းအကိုက်ပြီးနောက်နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း prefrontal cortex အတွက် noradrenaline နှင့် dopamine ၏ co-လွှတ်ပေးရန်. Psychopharmacology 160, 220-224 ။ Doi: 10.1007 / s00213-001-0985-y က။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဒိုဟာဆီ MD, Gratton အေ (1996) ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ meso-accumbens dopamine တုံ့ပြန်မှု Medial prefrontal cortical D1 အဲဒီ receptor မော်ဂျူ: လွတ်လပ်စွာ-ပြုမူကြွက်များတွင်တစ်ခုလြှပျစစျလေ့လာမှု. ဦးနှောက် Res. 715, 86–97. doi: 10.1016/0006-8993(95)01557-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dworkin SI, Guerin gf, Co. , C တို့, Goeders NE, Smith က je (1988) ။ သွေးကြောသွင်းမော်ဖင်းအကိုက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်နျူကလိယ accumbens ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 30, 1051-1057 ။ [PubMed]
Ettenberg အေ, Pettit HO, Bloom FE, Koob gf (1982) ။ ဘိန်းဖြူများနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်းသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များအားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ. Psychopharmacology 78, 204-209 ။ [PubMed]
Everitt BJ, Robbins TW (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှ compulsion မှ. နတ်။ neuroscience. 11, 1481-1487 ။ Doi: 10.1038 / nn1579 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Feenstra MG, Botterblom MH, Mastenbroek အက်စ် (2000) ။ အဆိုပါအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကာလအတွက် prefrontal cortex အတွက် Dopamine နှင့် noradrenaline efflux: အနျူကလိယ accumbens ဖို့အသစ်အဆန်းများနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်၏ဆိုးကျိုးများ. neuroscience 100, 741–748. doi: 10.1016/S0306-4522(00)00319-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Feenstra MG, Teske G. အ, Botterblom MH, က de Bruin JP (1999) ။ တစ်ဦး Contextual နှိုးဆွဖို့ဂန္ထဝင်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက် Dopamine နှင့် noradrenaline လွှတ်ပေးရန်: အသစ်အဆန်းသက်ရောက်မှုများကဝင်ရောက်စွက်ဖက်. neuroscience ။ လက်တ. 272, 179–182. doi: 10.1016/S0304-3940(99)00601-1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Feenstra MGP (2007) ။ "အေးစက်နှင့် operating အပြုအမူစဉ်အတွင်း dopamine နဲ့ norepinephrine ၏ Microdialysis," in Microdialysis ၏လက်စွဲစာအုပ်, လေယာဉ်ခရီးစဉ်။ 16, eds Westerink BHC, Cremers TIFH, အယ်ဒီတာများ။ (အမ်စတာဒမ်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း;), 317-350 ။
fields HL, Hjelmstad GO, Margolis eb, Nicola သည် SM (2007) ။ သင်ယူစာစားချင်စိတ်ကိုအမူအကျင့်များနှင့်အပြုသဘောအားကောင်းအတွက် Ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron. Annu ။ ဗျာ neuroscience. 30, 289-316 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.30.051606.094341 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Finlay JM, Zigmond MJ, Abercrombie ED (1995) ။ စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင် medial prefrontal cortex အတွက်တိုးမြှင့် dopamine နဲ့ norepinephrine လွှတ်ပေးရန်: diazepam ၏ဆိုးကျိုးများ. neuroscience 64, 619–628. doi: 10.1016/0306-4522(94)00331-X. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Floresco အက်စ်အနောက်အေ, Ash ကိုခ, Moore ကအိပ်ချ်, ဂရေ့အေ (2003) ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ. နတ်။ neuroscience. 6, 968-973 ။ Doi: 10.1038 / nn1103 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fudge JL, Emiliano AB (2003) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala နှင့် dopamine system ကို: အ dopamine ပဟေဠိ၏အခြားအပိုင်းအစ. ဂျေ Neuropsychiatry Clin ။ neuroscience. 15, 306-316 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fudge JL, Haber SN (2000) ။ မျောက်ဝံများအတွက် dopamine subpopulations ဖို့ amygdala စီမံကိန်း၏ဗဟိုနျူကလိယ. neuroscience 97, 479–494. doi: 10.1016/S0306-4522(00)00092-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စတိန်း LE, Rasmusson လေး, Bunney BS, Roth RH အ (1996) ။ ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်, neuroendocrine ၏ညှိနှိုင်းအတွက် amygdala ၏အခန်းက္ပ, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှ cortical monoamine တုံ့ပြန်မှု prefrontal. ဂျေ neuroscience. 16, 4787-4798 ။ [PubMed]
မီးခိုးရောင်ဂျာ McNaughton N. (2000) ။ ပူပန်ခြင်း၏ Neuropsychology: အ Septohippocampal စနစ်၏ Functions များသို့တစ်ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း: edn အောက်စဖို့, ဗြိတိန် 2nd ။
Grenhoff ဂျေ, Nisell အမ်, Ferre အက်စ်, Aston-Jones ဟာဂျီ, Svensson TH (1993) ။ ကြွက်များတွင် locus coeruleus ၏ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်း midbrain dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်၏ Noradrenergic မော်ဂျူ. ဂျေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm. 93, 11-25 ။ [PubMed]
Guarnieri DJ သမား, Brayton အီး, Richards သည် SM, Maldonado-Aviles ဂျေ, Trinko JR, နယ်လ်ဆင်ဂျေ, တေလာ JR, Gourley SL, Dileone RJ (2011) ။ မျိုးဗီဇကိုအစားအစာကန့်သတ်ရန်အတွက်မော်လီကျူးများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍမှထုတ်ဖော်ပြသ. Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 71, 358-365 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2011.06.028 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Guarraci အက်ဖ်အေ, Kapp BS (1999) ။ အဆိုပါနိုးယုန်အတွက် differential ကို pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ. ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res. 99, 169–179. doi: 10.1016/S0166-4328(98)00102-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hemby SE, ဂျုံးစ် GH, တရားမျှတမှု JB, Jr. က Neil DB (1992) ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုအေးစက်ပေမယ့်ကင်းများအချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens တာဟာအောက်ပါနေရာအရပ် preference ကိုအေးစက်မဟုတ်. Psychopharmacology 106, 330-336 ။ [PubMed]
Hnasko TS, Sotak BN, Palmiter RD (2005) ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်. သဘာဝ 438, 854-857 ။ Doi: 10.1038 / nature04172 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟော်လန်ကို PC, Gallagher အမ် (2004) ။ Amygdala-တိုကျရိုကျ interaction ကနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်မှန်း. Curr ။ Opin ။ Neurobiol. 14, 148-155 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2004.03.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Homayoun အိပ်ချ်, Moghaddam ခ (2007) ။ NMDA အဲဒီ receptor hypofunction prefrontal cortex interneurons နဲ့ Pyramid အာရုံခံအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်. ဂျေ neuroscience. 27, 11496-11500 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2213-07.2007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Horvitz JC (2000) ။ Non-ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များအဓိကရန် cortical နှင့် nigrostriatal dopamine တုံ့ပြန်မှု Mesolimbo ။ neuroscience 96, 651–656. doi: 10.1016/S0306-4522(00)00019-1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ikemoto အက်စ် (2007) ။ Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: အ ventral midbrain ကနေနှစ်ခု projection စနစ်များနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေးသော. ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 56, 27-78 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2008.02.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ikemoto အက်စ်, Panksepp ဂျေ (1999) ။ နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် dopamine accumbens: အထူးရည်ညွှန်းအတူစညျးလုံးအနက်ကိုဆုချစားမှုရန်. ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 31, 6–41. doi: 10.1016/S0165-0173(99)00023-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jackson က ME, Moghaddam ခ (2001) ။ နျူကလိယ၏ Amygdala စည်းမျဉ်း dopamine output ကိုပု prefrontal cortex ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည် accumbens. ဂျေ neuroscience. 21, 676-681 ။ [PubMed]
Jedema အိပ်ချ်, ဂရေ့အေ (2004) ။ Corticotropin-releasing ဟော်မုန်းကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ locus ceruleus ၏ noradrenergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင် စသည်တို့အတွက်. ဂျေ neuroscience. 24, 9703-9713 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2830-04.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jedema HP က, Sved AF, Zigmond MJ, Finlay JM (1999) ။ medial prefrontal cortex အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်၏အသိ: ကွဲပြားခြားနားသောနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု protocol များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. ဦးနှောက် Res. 830, 211–217. doi: 10.1016/S0006-8993(99)01369-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jensen ဂျေ, McIntosh AR, Crawley က AP, Mikulis DJ သမား, Remington G. အ, Kapur အက်စ် (2003) ။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်အတွက် ventral striatum ၏တိုက်ရိုက် activation. အာရုံခံဆဲလျ 40, 1251–1257. doi: 10.1016/S0896-6273(03)00724-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jhou TC, Fields HL, Baxter MG, Saper သမဝါယမ, ဟော်လန်ကို PC (2009) ။ အဆိုပါ rostromedial tegmental နျူကလိယ (RMTg), midbrain dopamine အာရုံခံတစ် GABAergic afferent, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု encodes နှင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်. အာရုံခံဆဲလျ 61, 786-800 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2009.02.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျူဒိုအီး, ချင်းမိုင် C. , Aston-Jones ဟာဂျီ (1998) ။ noradrenergic locus coeruleus အာရုံခံအပေါ် prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှု၏အစွမ်းထက် excitatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှု. neuroscience 83, 63–79. doi: 10.1016/S0306-4522(97)00372-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယောလဃ, Weiner ဗြဲ (1997) ။ အဆိုပါမျောက် subthalamic နျူကလိယ၏ဆက်သွယ်မှု: သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းနှင့် Basal ganglia-thalamocortical circuitry ၏ Open-အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အစီအစဉ်. ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 23, 62-78 ။ [PubMed]
ယောသပ်သည် MH, Datla K. , Young က AMJ (2003) ။ နျူကလိယ၏တိုင်းတာခြင်း၏အနက်ကိုတို့က dopamine accumbens Vivo အတွက် Dialysis: အကန်, ထိုတဏှာသို့မဟုတ်သိမှတ်ခံစားမှု? neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 27, 527-541 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.09.001 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယောရှုသည်အမ်, Adler အေ, Mitelman R. , Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် (2008) ။ Midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် striatal cholinergic interneurons ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဂန္ထဝင်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောယုဂ်မှာဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအကြားခြားနားချက်ဝှက်. ဂျေ neuroscience. 28, 11673-11684 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3839-08.2008 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kawahara Y. , Kawahara အိပ်ချ်, Westerink BH (1999) ။ hypotension ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များနှင့် locus coeruleus နှင့်ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် noradrenaline နှင့် dopamine များလွှတ်ပေးရေးအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်. Naunyn Schmiedebergs Arch ။ Pharmacol. 360, 42-49 ။ Doi: 10.1007 / s002109900042 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kensinger EA ၏, Schacter DL (2006) ။ noxious အပူလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဆုလာဘ် circuitry activation. ဂျေ neuroscience. 26, 2564-2570 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5241-05.2006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Killgore WDS, Young ကအေဒီ, Femia LA က, Bogorodzki P. , Rogowska ဂျေ, Yurgelun-Todd DA (2003) ။ အနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာများကိုနှိုင်းယှဉ် high- ၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း cortical နှင့် limbic activation. Neuroimage 19, 1381–1394. doi: 10.1016/S1053-8119(03)00191-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှငျဘုရငျသဃ, Zigmond MJ, Finlay JM (1997) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် extracellular dopamine အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးပေါ် medial prefrontal cortex အတွက် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ core နဲ့ shell ကို accumbens. neuroscience 77, 141–153. doi: 10.1016/S0306-4522(96)00421-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Bloom FE (1988) ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ. သိပ္ပံ 242, 715-723 ။ Doi: 10.1126 / science.2903550 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lammel အက်စ်, Hetzel အေ, Hckel O. , ဂျုံးစ်ဗြဲ, Liss ခ, Roeper ဂျေ (2008) ။ တစ်ဦးကို dual mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ. အာရုံခံဆဲလျ 57, 760-773 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2008.01.022 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lammel အက်စ်, Ion ပစ, Roeper ဂျေ, Malenka RC (2011) ။ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျ synapses ၏ Project-တိကျတဲ့မော်ဂျူ. အာရုံခံဆဲလျ 70, 855-862 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2011.03.025 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lapiz MDS, Morilak DA (2006) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုအစုကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာအဖြစ်ကြွက် medial prefrontal cortex အတွက်သိမြင်မှု function ကို၏ Noradrenergic မော်ဂျူ. neuroscience 32, 1000-1010 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2005.09.031 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Laviolette SR, Gallegos RA, Henriksen SJ, ဗန် der Kooy ဃ (2004) ။ Opiate ပြည်နယ် ventral tegmental ဧရိယာ၌ဂိဗာမွို့ receptors ကနေတဆင့်ပြ bi-directional ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ်ထား. နတ်။ neuroscience. 7, 160-169 ။ Doi: 10.1038 / nn1182 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လာဇရုကို RS (1991) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု. နံနက်။ Psychol. 46, 352-367 ။ [PubMed]
သည် Le Moal အမ်ရှိမုန်အိပ်ချ် (1991) ။ Mesocorticolimbic dopaminergic ကွန်ယက်ကို: functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ. Physiol ။ ဗြာ. 71, 155-234 ။ [PubMed]
Lewis က BL, O'Donnell P. (2000) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex မှ Ventral tegmental ဧရိယာ afferents ဃ (1) dopamine receptors မှတဆင့်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက်ပြည်နယ်များ '' တက် '' အလားအလာအမြှေးပါးကိုထိန်းသိမ်းရန်. Cereb ။ cortex 10, 1168-1175 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 10.12.1168 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Liprando LA က, Miner LH, Blake RD, Lewis က DA, Sesack SR (2004) ။ ကြွက်နှင့်မျောက် ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ norepinephrine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် dopamine အာရုံခံဖော်ပြဆိပ်ကမ်းအကြား Ultrastructural interaction က. synapses 52, 233-244 ။ Doi: 10.1002 / syn.20023 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
lu L. , Shepard JD, Scott ခန်းမအက်ဖ်, Shaham Y. (2003) ။ ကြွက်များတွင် opiate နှင့် psychostimulant အားဖြည့်, reinstatement နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 27, 457–491. doi: 10.1016/S0149-7634(03)00073-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lupinsky ဃ, Moquin L. , Gratton အေ (2010) ။ ကြွက်များတွင် medial prefrontal cortical အချိုမှုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု Interhemispheric စည်းမျဉ်း. ဂျေ neuroscience. 30, 7624-7633 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1187-10.2010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mackey သည့် WB, ဗန် der Kooy ဃ (1985) ။ Neuroleptics ရာအရပျအေးစက်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်စိတ်ကြွဆေး၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ပေမယ်. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 22, 101-105 ။ [PubMed]
Mahler SV, Berridge KC (2011) ။ အဘယ်အရာကိုများနှင့်သောအခါ "ချင်" သလော Amygdala-based သကြားနဲ့လိင်အပျေါမှာမက်လုံးပေး salience ၏အာရုံစူးစိုက်. Psychopharmacology (Berl ။ ) 221, 407–426. doi: 10.1007/s00213-011-2588-6. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Margolis eb, Lock ကိုအိပ်ချ်, Chefer VI ကို, Shippenberg TS, Hjelmstad GO, Fields HL (2006) ။ Kappa opioids ရွေးချယ်သည့် prefrontal cortex မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံထိန်းချုပ်. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 103, 2938-2942 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0511159103 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Matsumoto အမ်, Hikosaka O. (2009) ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျနှစ်မျိုးအဖြစ်ထင်ရှားစွာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုသိရှိစေရန်. သဘာဝ 459, 837-841 ။ Doi: 10.1038 / nature08028 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McGaugh JL (2005) ။ စိတ်ခံစားမှု arousal နှင့်မြှင့်တင်ရန် amygdala လှုပ်ရှားမှု: အဟောင်းဇွဲ-စုစည်းပြီးအယူအဆအသစ်သက်သေအထောက်အထား. လေ့လာပါ။ Mem ကို. 12, 77-79 ။ Doi: 10.1101 / lm.93405 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McGaugh JL (2006) ။ ပျော့အချိန်လေးအမှတ်ရစရာ Make: အနည်းငယ် arousal add. ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ. 10, 345-347 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2006.06.001 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McQuade R. , Creton ဃ, စတန်းဖို့ဒ် SC (1999) ။ ဖြင့်တိုင်းတာကြွက်အပြုအမူနှင့်ဗဟို noradrenaline function ကိုအပေါ်ဝတ္ထုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Vivo အတွက် microdialysis. Psychopharmacology 145, 393-400 ။ Doi: 10.1007 / s002130051073 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mingote အက်စ်, က de Bruin JPC, Feesntra MGP (2004) ။ ဂန္အေးစက် appetitive ဆက်စပ်. အတွက် prefrontal cortex အတွက် Noradrenaline နှင့် dopamine afflux. ဂျေ neuroscience. 24, 2475-2480 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4547-03.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Morilak DA, Barrera G. အ, Echevarria DJ သမား, Garcia က AS, ဟာနန်ဒက်ဇ်အေမာအက်စ်, Petr CO (2005) ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက် norepinephrine ၏အခန်းက္ပ. prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 29, 1214-1224 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2005.08.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Moron ဂျာ Brockington အေ, ပညာရှိ RA, Rocha BA, မျှော်လင့်ခြင်း BT (2002) ။ ခေါက်ထွက် mouse ကိုလိုင်းများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများ: အ dopamine ပို့ဆောင်ရေးအနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဦးနှောက်ဒေသများအတွက် norepinephrine Transporter မှတဆင့် Dopamine လွှာမှ. ဂျေ neuroscience. 22, 389-395 ။ [PubMed]
Mucha RF, Iversen SD က (1984) ။ conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးခွငျးအားဖွငျ့ဖျောပွထားပါမော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naloxone ၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်: တစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစာမေးပွဲ. Psychopharmacology 82, 241-247 ။ [PubMed]
Mueller ဃ, Stewart ကဂျေ (2000) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို: သုဉ်းပြီးနောက်ကင်း၏ priming ထိုးခြင်းဖြင့် reinstatement. ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်။ res. 115, 39–47. doi: 10.1016/S0166-4328(00)00239-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nader K. , Bechara အေ, ဗန် der Kooy ဃ (1997) ။ လှုံ့ဆျောမှု၏အမူအကျင့်မော်ဒယ် Neurobiological သတ်. Annu ။ ဗျာ Psychol. 48, 85-114 ။ Doi: 10.1146 / annurev.psych.48.1.85 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nader K. , Harrington အက်ဖ်, Bechara အေ, ဗန် der Kooy ဃ (1994) ။ Neuroleptics ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမြင့်မားသော်လည်းမနိမ့်ထိုးဘိန်းဖြူရာအရပ်ကိုဦးစားပေး: လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုနှစ်ခုစနစ်ကမော်ဒယ်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား. ပြုမူနေ။ neuroscience. 108, 1128-1138 ။ [PubMed]
Naranjo, CA, Tremblay LK, Busto UE (2001) ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ. prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 25, 781–823. doi: 10.1016/S0278-5846(01)00156-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nicniocaill ခ, Gratton အေ (2007) ။ ယင်းနျူကလိယ၏ Medial prefrontal cortical alpha1 adrenoreceptor မော်ဂျူ Long-အီဗန်ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုမှ dopamine တုံ့ပြန်မှု accumbens. Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 835–842. doi: 10.1007/s00213-007-0723-1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ထို Y. , ယောလဃဒါယန်း P. (2006) ။ လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်တစ်ဦးကစံတန်ဖိုးရှုထောင့်. ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ. 10, 375-381 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2006.06.010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Doherty ဂျေ၊ Kringerlbach ML, Rolls RT, Hornak J. , Andrews C. လူ့ orbitofrontal cortex အတွက်စိတ္တဇဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြု. နတ်။ neuroscience. 4, 95-102 ။ Doi: 10.1038 / 82959 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စာမျက်နှာ ME, Lucky ဗြဲ (2002) ။ ကြွက်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် monoamine efflux အပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် reboxetine ကုသမှုဆိုးကျိုးများ. Neuropsychopharmacology 27, 237–247. doi: 10.1016/S0893-133X(02)00301-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Palmiter RD (2008) ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်အချက်ပြ Dopamine လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်: dopamine-လစ်လပ်ကြွက်ထံမှသင်ခန်းစာများ. အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ. 1129, 35-46 ။ Doi: 10.1196 / annals.1417.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Panksepp ဂျေ (1998) ။ အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ: အဆိုပါလူ့၏ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စိတျလှုပျရှားမှု။ အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Pascucci တီ, Ventura R. , Latagliata EC, Cabib အက်စ်, Puglisi-Allegra အက်စ် (2007) ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex norepinephrine နှင့် dopamine ၏ဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ accumbens dopamine တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်သည်. Cereb ။ cortex 17, 2796-2804 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhm008 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pecina အက်စ်, Berridge KC, က Parker LA က (1997) ။ အရသာ reactivity ကိုအားဖြင့် sensorimotor ဖိနှိပ်မှုကနေ anhedonia ၏ခွဲခြာ: Pimozide အာခေါင် shift ပါဘူး. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 58, 801–811. doi: 10.1016/S0091-3057(97)00044-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pecina အက်စ်, Schulkin ဂျေ, Berridge KC (2006) ။ စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ဝိရောဓိအပြုသဘောမက်လုံးပေးသက်ရောက်မှု: နျူကလိယ corticotropin လွှတ်အချက် sucrose အကျိုးသည် cue-ဖြစ်ပေါ်လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါး accumbens? BMC Biol. 13, 8 ။ Doi: 10.1186 / 1741-7007-4-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pettit HO, Ettenberg အေ, Bloom FE, Koob gf (1984) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ၏အဗဒ္ဒုန်ရွေးချယ်ကြွက်များတွင်ကင်းသော်လည်းမဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates accumbens. Psychopharmacology 84, 167-173 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, Ahn အက်စ်, လင်းမြို့တွင် JG (2003a) ။ အဆိုပါ mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏ Amygdalar ထိန်းချုပ်မှု: လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူဖို့အပြိုင်လမ်းကြောင်း. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 27, 543-554 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.09.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Phillips က ML, Drevets WC, Rauch SL, ယာဉ်ကြော R. (2003b) ။ စိတ်ခံစားမှုအမြင်များ၏ Neurobiology ငါ: ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုအမြင်များ၏အာရုံကြောအခြေခံ. Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 54, 504–514. doi: 10.1016/S0006-3223(03)00168-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Phillips က Pem, ဝေါ်လ်တန် ME, Jhou TC (2007) ။ mesolimbic dopamine ခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် preclinical သက်သေအထောက်အထား: utility ကိုတွက်ချက်. Psychopharmacology 191, 483–495. doi: 10.1007/s00213-006-0626-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Piazza PV, Le Moal အမ် (1997) ။ ဆုလာဘ်တစ်ခုဇီဝအလွှာအဖြစ် Glucocorticoids: ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological ဂယက်ရိုက်. ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 25, 359–372. doi: 10.1016/S0165-0173(97)00025-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပီယပ် RC, Kumaresan V. (2006) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်က: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း? neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 30, 215-238 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2005.04.016 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ramos ကို BP, Arnsten AF (2007) ။ Adrenergic ဆေးဝါးဗေဒနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု: အ prefrontal cortex အပေါ်အာရုံစူးစိုက်. Pharmacol ။ Ther. 113, 523-536 ။ Doi: 10.1016 / j.pharmthera.2006.11.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rassnick အက်စ်, Stinus L. , Koob gf (1993) ။ ကြွက်များတွင်အီသနော၏ပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်နျူကလိယ accumbens နှင့် mesolimbic dopamine စနစ်၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ. ဦးနှောက် Res. 623, 16–24. doi: 10.1016/0006-8993(93)90004-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရစ်ချတ် JM, Berridge KC (2011) ။ နျူကလိယ dopamine / အချိုမှုအပြန်အလှန်ကြောက်ရွံ့သာရှိပြီးပြည်ပမှအလိုဆန္ဒထုတ်လုပ်ဖို့ Modes သာ switches accumbens: အစာစားချင်စိတ်များအတွက်: D (1) တစ်ဦးတည်းကိုကြောက်ရွံ့မစားပေမယ့် D ကို (1) နှင့် D ကို (2) အတူတူ. ဂျေ neuroscience. 31, 12866-12879 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1339-11.2011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Robbins TW (2000) ။ လူသားများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်ထဲမှာတိုကျရိုကျ-Executive function တွေကိုများ၏ဓာတု neuromodulation. Exp ။ ဦးနှောက် Res. 133, 130-138 ။ Doi: 10.1007 / s002210000407 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (1993) ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ. ဦးနှောက်။ res ။ ဗြာ. 18, 247-291 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (2003) ။ စှဲမွဲမှု. Annu ။ ဗျာ Psychol. 54, 25-53 ။ Doi: 10.1146 / annurev.psych.54.101601.145237 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Robbins TW, Arnsten AF (2009) ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-Executive function ကို၏ neuropsychopharmacology: monoaminergic မော်ဂျူ. Annu ။ ဗျာ neuroscience. 32, 267-287 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.051508.135535 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rolls ET (2000) ။ ဦးနှောက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏Précis. ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ. 23, 177-191 ။ [PubMed]
Roozendaal ခ (2000) ။ Glucocorticoids နှင့်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏စည်းမျဉ်း. Psycho neuroendocrinology 25, 213–238. doi: 10.1016/S0306-4530(99)00058-X. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roozendaal ခ, McReynolds JR, McGaugh JL (2004) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းအပေါ် glucocorticoid သက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် medial prefrontal cortex နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်. ဂျေ neuroscience. 24, 1385-1392 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4664-03.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rossetti ZL, Carboni အက်စ် (2005) ။ Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကြွက် prefrontal cortex အတွက် Noradrenaline နှင့် dopamine မြင့်တက်. ဂျေ neuroscience. 25, 2322-2329 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3038-04.2005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salamone JD ကော်ရဲရားအမ်, Farrar အေ, Mingote သည် SM (2007) ။ နျူကလိယ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine နဲ့ဆက်စပ် forebrain ဆားကစ် accumbens. Psychopharmacology 191, 461–482. doi: 10.1007/s00213-006-0668-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salamone JD ကော်ရဲရားအမ်, Mingote သည် SM, Weber နဲ့ SM (2005) ။ အကျိုးကိုယူဆချက်ထက်ကျော်လွန်: နျူကလိယ၏အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens. Curr ။ Opin ။ Pharmacol. 5, 34-41 ။ Doi: 10.1016 / j.coph.2004.09.004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salzman, DC, Fusi အက်စ် (2010) ။ Emotion, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် amygdala အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် prefrontal cortex. Annu ။ ဗျာ neuroscience. 33, 173-202 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.051508.135256 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sara SJ, Segal အမ် (1991) ။ သိမှတ်ခံစားမှုအဘို့အဂယက်: အပြုမူကြွက်များတွင် locus coeruleus အာရုံခံ၏အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု၏ plasticity. prog ။ ဦးနှောက်။ res. 88, 571-585 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူ (2007) ။ အမူအကျင့် dopamine အချက်ပြမှုများ. ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience. 30, 203-210 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2007.03.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sesack SR, Pickel VM က (1990) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် catecholamines ဆိပ်ကမ်း၏ခေါင်းစဉ်မသိအာရုံခံပစ်မှတ်ပေါ်ကြွက် synapses အတွက် Prefrontal cortical efferents septi accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံအပေါ်. ဦးနှောက် Res. 506, 166-168 ။ Doi: 10.1002 / cne.903200202 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sesack SR, Pickel VM က (1992) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် catecholamines ဆိပ်ကမ်း၏ခေါင်းစဉ်မသိအာရုံခံပစ်မှတ်ပေါ်ကြွက် synapses အတွက် Prefrontal cortical efferents septi accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံအပေါ်. ဂျေ comp ။ Neurol. 320, 145-160 ။ Doi: 10.1002 / cne.903200202 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Setlow ခ, Roozendaal ခ, McGaugh JL (2000) ။ မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏ glucocorticoid-သွေးဆောင်မော်ဂျူအတွက် basolateral amygdala ရှုပ်ထွေး-နျူကလိယ accumbens လမ်းကြောင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 12, 367-375 ။ Doi: 10.1046 / j.1460-9568.2000.00911.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Seymour ခ, Dolan R. (2008) ။ Emotion, ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလျှင်, amygdala. အာရုံခံဆဲလျ 58, 662-671 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2008.05.020 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shaham Y. , Shalev U. , Lu ကအယ်လ်, က de ကျေးအိပ်ချ်, Stewart ကဂျေ (2003) ။ သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်: မူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်. Psychopharmacology 168, 3-20 ။ Doi: 10.1007 / s00213-002-1224-x ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှီ WX, ပန်း CL, Zhang က XX, ဂျုံးစ် MD, Bunney BS (2000) ။ dopamine dopamine ကကမကထပြုခဲ့အာရုံခံခြင်းနှင့် nondopamine receptors အပေါ် D-စိတ်ကြွဆေး၏ dual ဆိုးကျိုးများ. ဂျေ neuroscience. 20, 3504-3511 ။ [PubMed]
Shippenberg TS, Herz အေ (1988) ။ opioids ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု: D1 အဲဒီ receptor ရန်သာရှိပြီးပြည်ပမှ D2 ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု. အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol. 151, 233–242. doi: 10.1016/0014-2999(88)90803-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Skinner BF (1953) ။ သိပ္ပံနှင့်လူ့အပြုအမူ။ နယူးယောက်, NY: အေ။
အသေးစား DM, Zatorre RJ, Dagher အေ, အီဗန်, AC, ဂျုံးစ်-Gotman အမ် (2001) ။ စားနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများ: အပျြောအပါးကနေခြင်းကိုမနှစ်သက်မှ. ဦးနှောက်ကို 124, 1720-1733 ။ Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / 124.9.1720 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spyraki C. , Fibiger HC, Phillips က AG က (1982) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအေးစက်: neuroleptics ၏သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်. ဦးနှောက် Res. 253, 195–203. doi: 10.1016/0006-8993(82)90686-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sturgess je, Ting-A-Kee RA, Podbielski ဃ, ရောင်းချ LH, ချန် JF, ဗန် der Kooy ဃ (2010) ။ Adenosine A1 နှင့် A2A receptors များသည် caffeine ၏ dopamine D2 receptor-dependence aversive effects နှင့် dopamine-independent အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အထက်ပိုင်းမဟုတ်ပါ။. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 32, 143-154 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2010.07247.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Taber MT, Fibiger HC (1995) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏လျှပ်စစ်ဆွကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး: metabotropic အချိုမှု receptors ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူ. ဂျေ neuroscience. 15, 3896-3904 ။ [PubMed]
Tanda G. အ, Pontieri FE, Frau R. , Di Chiara G. အ (1997) ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းအားဖြင့်ကြွက် prefrontal cortex အတွက် extracellular dopamine တို့၏စီးပွါးဖို့ noradrenaline လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ပံ့ပိုးမှုများ. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 9, 2077-2085 ။ [PubMed]
Tassin JP (1998) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ Norepinephrine-dopamine interaction က: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများဆက်စပ်မှု. Adv ။ Pharmacol. 42, 712-716 ။ [PubMed]
Tierney PL, Thierry လေး, Glowinski ဂျေ, Deniau JM, Gioanni Y. (2008) ။ Dopamine ကြွက် prefrontal cortex အတွက် feedforward တားစီး၏ယာယီဒိုင်းနမစ် modulates Vivo အတွက်. Cereb ။ cortex 18, 2251-2262 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhm252 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ting-A-Kee R. , Dockstader C. , Heinmiller အေ, Grieder တီ, ဗန် der Kooy ဃ (2009) ။ ဂါဘမြို့သား (က) receptors dopamine ၏ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အီသနောဒစိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအတွက် tegmental pedunculopontine နျူကလိယဖျန်ဖြေ. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 29, 1235-1244 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2009.06684.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Toates အက်ဖ် (1986) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ။ ကင်းဘရစ်, MA: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနှိပ်ပါ။
Toates FM ရေ (1994) ။ "စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ-တစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုရှုထောင့်, Comparing" in အစာစားချင်စိတ်: ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်အပြုအမူအခြေစိုက်, eds Legg CR, Booth DA, အယ်ဒီတာများ။ (နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း;), 305-327 ။
Tronel အက်စ်, Feenstra MG, Sara SJ (2004) ။ မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးများ၏နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်တွင် prefrontal cortex အတွက် Noradrenergic အရေးယူ. လေ့လာပါ။ Mem ကို. 11, 453-458 ။ Doi: 10.1101 / lm.74504 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsai HC, Zhang ကအက်ဖ်, Adamantidis အေ, Stuber GD, Bonci အေ, က de Lecea L. , Deisseroth K. (2009) ။ dopaminergic အာရုံခံအတွက် Phasic ပစ်ခတ်ရန်အမူအကျင့်အေးစက်များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်. သိပ္ပံ 324, 1080-1083 ။ Doi: 10.1126 / science.1168878 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tzschentke TM အလိုအလျောက် (1998) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများ၏ပြီးပြည့်စုံသောသုံးသပ်ချက်ကိုမကြာသေးခင်တိုးတက်မှုနှင့်အသစ်ကိစ္စများ: အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း. prog ။ Neurobiol. 56, 613–672. doi: 10.1016/S0301-0082(98)00060-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ungless MA, Magill PJ, Bolam JP (2004) ။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ယူနီဖောင်းတားစီး. သိပ္ပံ 303, 2040-2042 ။ Doi: 10.1126 / science.1093360 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Valentino R. , ဗန် Bockstaele အီး (2001) ။ corticotropin-releasing အချက်နှင့် opioids အားဖြင့် locus coeruleus ၏စည်းမျဉ်းဆန့်ကျင်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် opioid sensitivity ကိုအကြားအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်များအတွက်အလားအလာ. Psychopharmacology 158, 331-342 ။ Doi: 10.1007 / s002130000673 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Bockstaele အီး, Bajic ဃ, Proudfit အိပ်ချ်, Valentino R. (2001) ။ အဆိုပါ noradrenergic locus coeruleus ပစ်မှတ်ထားစိတ်ဖိစီးမှု-related လမ်းကြောင်း၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဗိသုကာ. Physiol ။ ပြုမူ. 73, 273–283. doi: 10.1016/S0031-9384(01)00448-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် der Kooy ဃ (1987) ။ ": မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းအေးစက်ချထားပါ" in အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့် Properties ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ, Bozarth MA, အယ်ဒီတာ ed ။ (နယူးယောက်, NY: Springer-Verlag;), 229-240 ။
ဗန် der Meulen ဂျာ Joosten RN, က de Bruin JP, Feenstra MG (2007) ။ အမှတ်စဉ်ပြောင်းပြန်နှင့်ဆာပဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူမျိုးသုဉ်းစဉ်အတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် Dopamine နှင့် noradrenaline efflux. Cereb ။ cortex 17, 1444-1453 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhl057 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vargas-ဖာအိပ်ချ်, Ting-A-Kee R. , ဝေါ်လ်တန် CH, Hansen DM, Razavi R. , Clarke L. , Bufalino MR, Allison DW, Steffensen SC, ဗန် der Kooy ဃ (2009) ။ Ventral Tegmental ဧရိယာ BDNF နုံကြွက်များတွင်တစ်ခု opiate-မှီခိုကဲ့သို့ renard ပြည်နယ် induces. သိပ္ပံ 324, 1732-1734 ။ Doi: 10.1126 / science.1168501 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , Alcaro အေ, Cabib အက်စ်, Conversi ဃ, Mandolesi L. , Puglisi-Allegra အက်စ် (2004) ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် Dopamine mesoaccumbens dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ရွေ့လျားအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏ genotype-မှီခိုသက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထား. Neuropsychopharmacology 29, 72-80 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300300 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , Alcaro အေ, Puglisi-Allegra အက်စ် (2005) ။ Prefrontal cortical norepinephrine လွှတ်ပေးရေး, အနျူကလိယ accumbens အတွက် reinstatement နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အကျိုးသည်အလွန်အရေးကြီးသည်. Cereb ။ cortex 15, 1877-1886 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhi066 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , Cabib အက်စ်, Alcaro အေ, Orsini C. , Puglisi-Allegra အက်စ် (2003) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် Norepinephrine စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်များနှင့် mesoaccumbens dopamine လွှတ်ပေးရန်အရေးကြီးသည်. ဂျေ neuroscience. 23, 1879-1885 ။ [PubMed]
Ventura R. , Cabib အက်စ်, Puglisi-Allegra အက်စ် (2001) ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှဆန့်ကျင်ဘက် genotype-မှီခို mesocorticolimbic dopamine တုံ့ပြန်မှု. neuroscience 104, 627–633. doi: 10.1016/S0306-4522(01)00160-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , Cabib အက်စ်, Puglisi-Allegra အက်စ် (2002) ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ mesocortical dopamine ၏မျိုးဗီဇလွယ်ကူစွာထိခိုက် mesoaccumbens dopamine ၏တားစီးရန်နှင့်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခု mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်အမူအကျင့် '' စိတ်ပျက်လက်ပျက် 'ဖို့တာဝန်ယူမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်. neuroscience 115, 999–1007. doi: 10.1016/S0306-4522(02)00581-X. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , က de Carolis ဃ, Alcaro အေ, Puglisi-Allegra အက်စ် (2006) ။ အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ်ဟာ prefrontal cortex အတွက် norepinephrine အပေါ်မူတည်. Neuroreport 17, 1813-1817 ။ Doi: 10.1097 / 01.wnr.0000239964.83566.75 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , Latagliata EC, Morrone C. , la Mela ဗြဲ, Puglisi-Allegra အက်စ် (2008) ။ Prefrontal norepinephrine "မြင့်သော" စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ကိုတွက်ချက်ဆုံးဖြတ်. PLoS ONE. 3: 3044 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0003044 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ventura R. , Morrone C. , Puglisi-Allegra အက်စ် (2007) ။ Prefrontal / accumbal catecholamines system ကို reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 104, 5181-5186 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0610178104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် DV, Tsien JZ (2011) ။ အဆိုပါ VTA dopamine အာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများ၏ convergence အပြောင်းအလဲနဲ့. PLoS ONE 6: e17047 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0017047 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် G.-J. , Volkow ND, Thanos PK, မုဆိုး JS (2004) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအကြားတူညီ neurofunctional ပုံရိပ်တို့ကအကဲဖြတ်အဖြစ်: တစ် concept ကိုပြန်လည်သုံးသပ်. ဂျေစွဲ။ dis. 23, 9–53. doi: 10.1300/J069v23n03_04. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (1996) ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်. Annu ။ ဗျာ neuroscience. 19, 319-340 ။ Doi: 10.1146 / annurev.ne.19.030196.001535 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု. နတ်။ ဗျာ neuroscience. 5, 483-494 ။ Doi: 10.1038 / nrn1406 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Womer DE, ဂျုံးစ်ဘီစီ, Erwin VG (1994) ။ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကိုကင်းများ၏ locomotor သက်ရောက်မှု, GBR 12909, epidepride နှင့် C23390BL အတွက် SCH 57 နှင့် DBA ကြွက်များ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 48, 327-335 ။ [PubMed]
Zink CF, Pagnoni G. အ, Chappelow ဂျေ, မာတင်-Skurski အမ်, Bern GS (2006) ။ လူ့ striatal activation လှုံ့ဆော်မှု saliency ၏ဒီဂရီထင်ဟပ်. Neuroimage 29, 977-983 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2005.08.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zink CF, Pagnoni G. အမာတင် ME, Dhamala အမ်, Bern GS (2003) ။ လှုံ့ဆော်မှု nonrewarding အဓိကဖို့လူ့ striatal sesponse. ဂျေ neuroscience. 23, 8092-8097 ။ [PubMed]
Zocchi အေ, Orsini C. , Cabib အက်စ်, Puglisi-Allegra အက်စ် (1998) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏စင်ပြိုင် strain-မှီခိုအကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ခု Vivo အတွက် ကြွက်များတွင်လေ့လာမှု. neuroscience 82, 521–528. doi: 10.1016/S0306-4522(97)00276-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zorawski အမ်, Killcross အက်စ် (2002) ။ အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိ pavlovian discrete-cue အေးစက် Paradigm အတွက်မှတ်ဉာဏ် agonistenhances glucocorticoid အဲဒီ receptor Posttraining. Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို. 78, 458-464 ။ Doi: 10.1006 / nlme.2002.4075 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]